नेपाली यौन कथा अनलाईन : June 2013
नेपाल मा भालु ठोक्ने ठाउँ हरु कहाँ कहाँ छ
यो लेख प्रभात थापा ज्यु ले पठाउनु भको हो,
आदर्णीय साथीहरु कृपया नकरत्मक रुपले नसोच्नु होला। म नेपाल को १ ठुलो कम्पनिको मर्केटिङ म्यानेजरको रुपमा काम गर्दै छु। काम को शिल शिलामा म नेपाल भरिनै घुम्नु पर्छ तेसैले नेपाल का धेरै नै ठाउको होटल हरु अनी होटल का काम धन्दा हरु पनि धेरै नै थाहा भएको छ। अब सधैं नै बहिर हिंड्नु पर्ने भएकोले होटल मा नै सुत्नु पर्ने र प्रोफेसनल भालु हरु सँग नै रात बिताउनु पर्ने हुनाले मलाई थाहा भएको केही ठाउँ को बारेमा जानकारी दिन लगेको छु। पहिला कुरा शुरु गरु काठमाडौं बाट। काठमाडौं मा म धेरै जने भनेको ठमेल सन्चएे कोश को बिल्डिङ वोरी पारी हो। यदी तपाईंहरु लाई भालु चहियो भने सिधै त्यो यरियाका लजमा गएर कुर गरे हुन्छ। होल नाईट को लागि हो भने १५००-२००० मा ठिकै को भलु पाईन्छ। लज वला सँग सिधै कुर गरे हुन्छ। तेसैगरी रात म १२-१ बजे डान्स बन्द भये पछी सन्चएे कोस बिल्डिङ वर पर टन्नै भलु हरु पाईन्छ। तपाईंहरुले पत्याउनु हुन्न भने हेर्नुश हरेक राती १ बजे भालु र छक्का हरुले बाटो जाम हुन्छ त्यो यरियामा। तेसै गरी दिन म नै १-२ ठयाक लगाउन मन छ भने पनि त्यो यरियामा भालु अद्द नै छ। त्याहा ग्रहक खोज्न भुरा भुरिहरु रखिएको छ उनिहरुलाई नै सोध्यो भने सिधै लगिदिन्छन अनी तपाईंले छनी छनी भलु हने हुन्छ। त्यसई गरी दरबारमार्ग का ठुला ठुला होटेल हरु ले पनि स्ट्यान्डर स्ट्यान्दर को भलु रखेक छन। ति भलु हान्न तपाईं राती दरबार मार्गमा त्यक्सी लियर जानुश अनी त्यक्सी वाला लाई दरबारमार्ग आएपछी अली स्लो गर्दै रोक्दै हिंड्न् भन्नुश त्यहा तन्नै होटल वालाको दलाल हरु आउछन तपाईं कुराकानी ट्यक्सिमा नै बशेर नै फाईनल गर्नुश अनी जानुश। त्यह बाट केटीहरु तपाईंलाई छान्न दिन्छन अनी मन परेको केटी सँग रात गुजार्नुस। तर पैसा भने ३-५ हजर सम्मा लिन्छ।
तेसै गरेर रत्नपार्क बिर्हस्पिटल यरियामा पनि दिउसो देखिनै सस्ता भालु हरु पाउन सकिन्छ। बालाजु बस पार्क वरपर पनि सस्ता भालु हरु पाईन्छ। तेस्ताइ भक्तपुर जाने बाटो तिरक रेस्तुरेन्ट म पनि १-२ ठ्याक लगाउनको लागि माल हरु पाईन्छ। अनी ग्वार्को तिरको क्याबिन रेस्तुरेन्टहरुमा पनि १-२ ठ्याक लगाउनको लागि माल्हरु पाईन्छ। आज कल काठमन्डौका धेरै प्रतिशत रेस्तुरेन्ट हरु ले १-२ ठ्यक लगाउनको लागि स्पेसल रुम बनएका छन तपाईं सधैं आउने ग्रहक जस्तोकुरा गरी आफ्नो काम पुर हर्न सक्नु हुन्छ। यो त भयो काठमन्डौको कुरा। अब बिरगंज को कुरा। बिरगन्ज को सबै क्याबिन रेस्टुरेन्ट मा भालु हरु छन। बाईपास मा रहेका मुरली मा अनी गन्डक को ति कर्टेज रेस्टुरेन्ट हरुमा जती पनि भालु पाईन्छ। फुल नाईत को लागि बाईपास बसपार्क यरिया मा टन्नै भालु पाईन्छ। तर बिर्गन्ज का भालु हरुले स्पेसल ईन्डियन हरु लाई ठोकाउने भएकले नेपाली सँग पनि धेरै पैसा मग्दछन। अनुहार र दनुहार्की भलु लाई २-३ हजार दिनु पर्छ। अनी १ कुरा बिरगन्ज का भालु हरु अली फोहोरी नै देखिन्छ। बिहारिहरुको संगत ले हार्ड नै होला।
अब कुरा गरु बाग्लुङ बस्पार्क को। बाग्लुङ बस पार्क म कारीब कारीब १०-१५ वाटा भात्टी पसल को माथि माथि तला मा सबै भालु हरुको अड्डा हुने रहेछ। नचिनेका मान्छे हरु भात्टी म नै फिट भएर फर्कान्छान तर थाहा भएक न्मन्छे हरु भात्टी माथिका अनी भित्र का गोप्य कोठा मा मस्त भलु हानेर मोज गर्दछन। पैसा पनि धेरै लाग्दैन अनी माल हरु पनि मस्त मस्त पाउछ त्याहा। तेसै गरी पोखरा का क्याबिन रेस्तुरेन्ट हरुमा पनि भलु हान्न पाईन्छ। अनी लोक दोहोरी मा पनि मस्त मस्त माल हरु पाईन्छ तर अली पैसा खर्छ गर्नु पर्छ।, आज कल म नारायण घाट मा छु। यहाँ पनि टन्नै होटल हरु छन माल को लागि। एउटा स्पेसल होटेल छ यहाँ त्यो पहिला हेटौंडा मा थ्यो आज्कल नारायण घाट को बस्पार्क को चौतारी अगाडि नै छ। मेरो आज्कल तेतै काम चल्दै छ।
साथीहरु अब म २-४ दिन मा धरान तिर जानु पर्ने भएको छ त्यता मेरो लागि नौलो छ तेशैले हजुर हरु लाई पनि थाहा छ भने कन्मेटा मा लेखिदिनु होला। साथै माथि मैले बाटयका ठाउँ हरुको पुरा नाम ठेगाना चाहनु हुन्छ भने तल हजुर हरुको ईमेल आइ डि लेख्नु होला। धन्यवाद
.: . कृपया तपाईंहरु सँग पनि यदी यस्तै यस्तै कथा हरु छन अनि प्रकाशन गर्न चाहनु हुन्छ भने कुनै सङ्कोच नमनी deepakthapag@yahoo.com मा पठाउनु होला । तपाईं को कथा तपाईले चाहे जस्तै किसिम ले हामिहरु प्रकसन गर्दछौ । धन्यबाद सम्झानु होला ईमेल आई डि deepakthapag@yahoo.com.
हामी चिकमरी खेल्न थालेउ
उन्को रूम राम्रो थियो एउटा बेद अनी सोफ पनि मिलएर राखेको रहेछ पहिल म कहिले पनि उन्को रूम म गएको थियिन। टेस्पछी उन्ले मतिर हेर्दाइ वनिन हेर्दिनुस् न कम्प्युटर मैले ओके वने अनी हेर्न थालेन कम्प्युटर केही वको रहेनेछ वाएर छुतेको रहेछ तेतिपनी हेरिनछे उस्ले। मैले वाएर कोन्नेक्त गरेपछी कम्प्युटर ओन वयो अनी उस्ले थ्याँक्स वनी र मैले कम्प्युटरको डेस्कटप हेरेको त्यह भिडियो लेखेको फोल्डर रहेछ मैले त्यो फोल्डर म क् छ वनेर उस्लाई सोध्नुवन्द पहिलेनै फोल्डर खोलेर सोधेको उस्ले नखोल्नु वन्नै नपौदै त्यह मैले देखिहलेन सबै ब्लु फिल्म्स रहेछ। मैले त्यो देखेपछी उस्को मुहर हेरेको त उत रातो वकी रहिछ।
उस्ले लजौदै हेर्छु वनेर टाउको हल्लाई।
टेतिखेर मेरो वने लदो थन्किएर खपिनस्क्नु वको थियो र मैले आफुलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन अनी उस्लाई बिस्तारै समत्न पुगेन। उस्ले क् गर्न लको वनी मैले वने प्लिज एक्चोटएे चिकौ न वने तर यू नै वन्दै पर जन लागि तर मेर हत्ले उस्लाई बेस्मरी समती सकेक थिए।
उस्ले नगरौ वन्द वन्दैपनी मैले उस्क ठुल बूब्स तिर हत बधएर दुइतै बूब्स मद्न थालेन तेस्पछी वने यू केही नबोली मेरो अङलोमै बसिरही।
टेस्पछी कम्प्युटरमा ओन वको भिडियो बन्द गरेन र सङ्यलाई समतेर नजिक ल्यै किस्स गरेन किस्स गरिरहेन तेस्पछी त झन चिक्न मन लाग्यो बिस्तारै उस्को चक्तिर हत लगेर चक पनि मद्न थालेन। यू वने अझ एमोतिओन्मा अैरकी थि। उस्ले तिघ्त टीसर्ट अनी तिघ्त ट्राउजर लगकी थि जस्बाट उस्क बूब्स अनी चक्को सिजे देखिन्थ्यो। मैले बिस्तारै उस्लाई सोफमा सुतएन अनी उस्क लुगहरु एक एक गर्दै फुकल्न थालेन। पहिल उस्को टीसर्ट खोलेन उस्ले ब्लक्क ब्र लगकी राइछ त्यो पनि खोलेन अनी ट्राउजर खोलेन वित्र उस्ले ब्लक्क पन्तएे लगकी रहिछे त्यो पनि खोलेर उस्लाई पुरै नङो बनैदिएन।
कारीब ५मिनट जती मैले मेरो लदोलाई धकेलिरहेन अनी मेरो बिर्य झर्न लाग्यो मैले उस्को मुख्मा हल्न खोजेन तर उस्ले मानिन् अनी तेही नै झरेन अनी उशो पनि बिर्य झ्र्यो।तेस्पछी त दुबइ जन अन्गालो हलेर दल्लो पारीरहेउ अनी म उठेन तर सङ्य वने एक्छिन सम्मा पनि उथ्न सकिन।
एक्छिन आरम गरेपछी फेरी मेरो लदो थन्क्यो अनी फेरी हामी चिकमरी खेल्न थालेउन उस्लाई त्यो दिन मैले जम्मा ४ चोटि मात्र चिकेन दोग्गी स्टाईलमा सोफमा रखेर दुध मद्दै चिक्द त मलाई सब्वन्द मज आको थियो। टेस्पछी मैले उस्लाई थ्याँक्स वने मलाई चिक्न दिएकोमा अनी उस्ले पनि जीवनम
जीवनमा सबैवन्द स्वोर्गिय आनन्द दिएकोमा मलाईपनी थ्याँक्स वनी अनी पुती पुछ ।।। ।पक्ष परेर बथ्रूम जन लागि म वने आफ्नो रूम्मा झरेन। टेस्पछी हामी जहिले पनि त्यस्तो मौका मिल्यो वने चिक्थेउन।
दनादन दिन थाले
एक दिन रोजिन मेरो घरमा आएकी थी। यू आउने बित्तिकै म धेरै खुशी भएन। अनी उस्लाई भने खोइ त प्रोमिसे गरेको कुर पुर गरेको। उस्ले बुझेर बुझ पक्षएको हो य नबुझेको मैले केही थम्मौनै सकिन।त्य्सैले मैले फेरी भनेन क्य हो त तेही तिमीले अस्तिनै हाम्रो पहिलो मिलन हुन लाग्द गरेको वडा, क् तिमीले भुलेऔ। क् भनेको खै मैले त केही बुझिन कस्तो प्रोमिसे। आइ दोन्'त क्नोव। तेस्पची चन्ही मैले प्रस्तै भने असारएे क्य हो त तिम्रो र मेरो मिलन हुन लाग्द तिमीले मलाई तिम्रो साथी सँग भेटउन्छु भनेको होइन? उनी अच्र्य हुँदै भनिन्न, "ए" त्यो कुर भनेको ल त्यो त म मिलाई हल्छु नि, चिन्तै गर्नु पर्दैन। उन्को यो कुर ले फेरी मेरो मन्न एउटा सुनौलो अन्द फुत्न लाग्यो।
रिजिन ले मलाई ईशाराले बोलैइन्न अनी म पनि उन्को पछी पछी गएन। उन्ले मेरो ममी सँग बोले जस्तो गर्दै म तिर पुलुक पुलुक हेर्थिन्न र म पनि। मेरो ममी ले मलाई भन्नु भयो बाबु जौ त कान्छी लाई रेस्ट रूम म लिएर अनी फेरी रोजिन लाई पनि जौ ननु एक चाइना अरम गर म कफि बनएर लिएर आउन्छु भने र किचेन तिर लगे। नि हामी पनि मेरो रूम म गयौन।
मेरो खोथ म चिरेक मात्र क् थियौन मैले उन्को दुध समतिहले अनी उन्लाई उचलेर मेरो खत्मा लगेर सुतएन। अनी म उनी माथि सुतेर उन्को गुलबी ओथ चुस्न थालेन। एक चाइना मात्रै दुध मोल्दै किस्स क् गरेको थिएन ममिको आवाज आयो "बाबु कोफ्फे लिना आउ त"। म झसँग भएन अनी हत्त न पत्त मेरो मुख उन्को मुख्बाट झिकीन अनी भने हुन्छ ल म आएन। म रोजिनलाई बस्दै गर ल भनेर किचेन म कफि लिना गए।
म किचेन म मात्रै क् पुगेको थिएन ममिको मोबाईल म फोन को घन्ती बज्यो। ममिले उठाउनु भयो अनी भन्दै हुनुहुन्थ्यो "अहिलाई आउनु पर्ने, क् पर्‍यो र।।।।।।यीएे।।।।ल ल।।मा अैहलेन ।।।त्यहाँन काम मिलौन्दै गर्नु भन्दै फोन राख्नु भयो। अनी मलाई बाबु ल कफि तिमी पनि खानु रोजिन लाई पनि दिनु म अफिस जानु पर्ने भयो अनी मैले सोधेन किन र ममी अहिलाई जन लग्नु भएको? उहानले भन्नुभयो एउटा जरुरी काम पर्‍यो क्य बेलुक म आउन अली धिल हुन पनि सक्छ अथवा म नाआउन पनि सक्छु। अदी म अैन भने पनि खान बनएर खानु ल भन्दै आफ्नो बेद्रूम तिर लग्नु भयो। मैले पनि हस्स भनी कफि दुइोत कप म हलेर मेरो रूम म गएको त रोजिन ब्लन्केत ओदेर सुतिरहेकी रहेचिन्न। अ पनि बिस्तारै कोठा भित्र चिरेन अनी बिस्तारै धोकको चुकुल लगएन अनी टेबल म कफि रखेर बेद म गएन अनी उन्ले ओदेको ब्लन्केत बिस्तारै झिकिदिएको त अचम्म भयो।।।।।।।।।।मेरो मत्लब उनी त पुरै जन्मजत नग्न अबस्त म पो रहेचिन्न। यो देखेर म एकदमऐ खुशी भएन। उनी आँखा चिम्लिएर लम्पसर लगेर सुतिरहेकी थिन्न यो अबस्त म उन्लाई स्वोर्गको अप्सर जस्ताइ देखिन्थ्यो तेसैले मैले उन्लाई हेरिरहेन।
केही समय पछी मैले उन्को खुट्टा देखी किस्स गर्दै उन्को मुख सम्मा पुगेन। मैले पनि मेरो पुरै कपद खोलेन र उन्को पुतिमा मेरो लदो चिरौन थाले। उन्लाई मजले दनदन्न दिन थालेन। एसरी केही बेर्‍ चिके पछी मैले उन्लाई भने मेरी प्यारी रानी प्लिज।।।। तिम्रो साथीलाई बोलौन प्लेअसे।।।।।प्लेअसे।।।।प्लेअसे।।। अनी उन्ले मेरो रिक्वेस्ट लाई नकर्न सकिनन्न तेसैले उन्ले आफ्नो साथीलाई फोन गरेर यहाँन आउन भनिन। उन्को साथी रोजिनले भने पछी ज् पनि गर्ने हुनाले उन्ले एक कल फोन गर्ने बित्तिकै उन्को साथीले भनिन्न हुन्छ ल म एक चिन्न म आउन्छु।
अली माथि सारी
म उस्को नजिक हुन थाले देहेरै दिन्वर उु सँग गफ वयो। उस्ले म सँग खुलेर कुर गरी। र रती सुत्ने बेलामा घर म सबै लाई सुत्न बेद पुग्दैन थियो। म र हामी अरु पच्-६ जन क्त हरु एउटा रूम म सुत्नीए वयोउ। ष्रेय र अरु क्थरु सिदे कोठुल्ओ रूम म सुत्ने वए। हामी नौ बजे सम्मा गफ गरेर बस्योउ। ट्यस्प६ी अबसुत्ने वनेर क्त हरु बेद मगए। सबै लाई बेद नपुग्ने वएको ले श्रेय सोफ म सुत्ने वाइ। म पनि क्त हरु सँग आफ्नो रूम म आएर लाईट ओफ्फ गरे। तर मलाई निन्द्रा लगिर थेन। मलाई श्रेय कै यद आउँदै थ्यो रौस्को चक, र वखर बधेइगको बूब्स। मेरो लदो थन्केर स्त। वाइ सकेको थ्योर क् गर्ने वनेर सोच्न थाले। श्रेय लाई सम्झिदै मचोल्न थाले। तर सबै क्त बेद म सुतेक ले अरु ले थाहा पौने दर ले मैले मजले चोल्न पनि पेन। मलाई ६अत पती वयो र म उठे र बहिर आए। कारीब ११ बजेको थ्यो होल। सबै जन सुती सकेक थिए। ष्रेय सुतेको रूम कोलाईट ओफ्फ थियो तर गर्मी हुन्६ वनेर होल ढोका उदङै राखेको थियो। म केही नसोची सिदै श्रेय वएतिर गएर यू सुतेको सोफ को ६ौ म बसे। यू सुती रखे कि थि र उस्को खुत अली फरिएर स्किर्त बाट हिप्स देखी राखेको थ्यो। मैले नजनी कन्नै मेरो हत उस्को हिप्स म रके। यू झस्कियी। शायद यू पनि नानीदएर आँखा चिम्लेर बसी रथी। उस्ले हल्ला नगरि अली माथि सारी। अधेरो म पनिशायद उस्ले मै हुँ भन्ने थम्यै। मलाई पनि सिग्नल पै प६ी उस्को हिप्स मद्न थाले। म यू माथि छाडे र उशा को लिप्स म किस्स गर्न थाले। उस्लेपनी मेरो तोङुए लाई चलाऊनथली। उस्ले अधेरो मै पनि रुमाल ले आफ्नो अनुहार चोपी। मैले नि कुर बुझेर उस्को बूब्स मर्द्न थाले। उस्को बूब्स तिघ्त थियो। यू अबज निकल्न थालि। मलाई दर लागि रहेकोथियो तर म धेरै अगाडि बदी सकेको थिए। मैए उस्को पन्तएे तानेर फुकलिदिय र मेरो पन्त को जिप खोलेय्र लदो निकले। हत ले उस्को पुती एक्६िन चमेप६ी मैले मेरो लदो चिरएर हान्न थाले। मैले मेरो हत्ले उस्को मुख बन्द गर्दिअ।१०-१२ चोटि पुष गरेप६ी मेरो मल यू वित्र पर्‍यो र महिले लदो निकले र पन्त वित्र हले र सिद आफ्नो रूम म आएर सुते र एकै६िन म निदए। बिहान् उथ्द मलाई सप्न धेखे जस्तो लाग्दै थ्यो तरमेरो पिल्सिअको लदो पोल्दै थियो। मलाई अनी श्रेय को ख्याल अयो। त्यसरी रती हनेर केही नवनी म आएकोथिए। अजै म आफ्नो घर जानुपर्ने वएको ले म उठेर सिदै फर्मकी गये एकोन लिना। मैले एकोन श्रेय लाई दिन खोज्दै थिए। तर उस्लाई वेती रहेको थिएन। उस्को एउटा साथी लाई सोध्द यू अर्को रूम म रोइ रहेकी ६े भन्ने थाहा पए। म जड उसची रोइ रहेकी थि। उस्क साथी ले सोद्द केही बोली र थिन। मलाई उस्लाई वेत्ने शाही टाईम होइन जस्तो लगेर फर्किए। मुम्मी म र दादा निस्किने लाग्द यू पनि देख पारी। म केही फ्री टाईम पएर श्रेय लाई वेत्न खोजे। औत कोर्नेर म मैले उस्लाई एक्लै पए। यू नबोली मेरो अगाडि उबी रही। मैले उस्लाई सोदे"मा सँग रिसकी" अनी उस्को हत म एकोन रखेर कसैले देख्नु अघी निस्कन खोजे। तर उस्ले मेरो हत समै र मेरो लिप्स म छोटो किस्स दिएर बाइ वन्दै वित्र गाई। त्यो दिन देखी यू सँग मेरो कन्ट्याक्ट् छैन। होपे अर्को दशै म फेरी हाम्रो वते हुन्६अ।
सुस्मिताजी को प्यासी कथा
यो कथा सुस्मिता थापा जि ले ईमेल बाट पठाउनु भएको हो।
कृपया पाठक हरु हजुर हरुले मलाई नकरात्मक रुपले हेर्नु हुने छैन भन्ने आसा लियकी छु। म यो लुकेको समाज अनलाईन साहित्यको पारखी हुँ। मैले यसमा भएका सबै कथाहरु पढि सकेको छु। यो सबै कथाहरु पढे पछी मलाई पनि मेरो मनको कुराहरु लेख्न मन लागेको छ्। हुनत मलाई त्यस्तो राम्रो सँग लेख्न त आउँदैन तरपनी लेख्ने प्रयास गर्दै छु। मेरो नाम सुस्मिता थापा हो मेरो भर्खर विवाह भएको छ्। मेरो बुढा १ ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनिमा काम गर्नु हुन्छ। उहा सधैं अफिसको काममा नै ब्यस्त हुनुहुन्छ। मेरो बुढा अली दुब्लो पातलो हुनुहुन्छ। कुरा मेरो विवाह हुनु भन्दा पहिलाको हो मेरो १ जना मन मिल्ने केटा साथी थियो । यू मेरो घर नजिकैको थियो तथा म सँग नै क्याम्पस मा पढ्थ्यो। उस्को नाम रमेश थियो। रमेश को बोलिचाली त धेरै नै मन्पर्थ्यो त्यो भन्दा पनि उस्को हट्टा कट्टा शरीर थ्यो। म सँग उस्को सधैं हाम्रो नै घर मा भेटघाट हुन्थ्यो। यू मेरो कोठामा नै आइ रहन्थ्यो उस्लाई मेरो कोठामा आउन केही रोक्तोक थिएन किनकी उु हाम्रोनै छिमेकी थ्यो। म लाई उस्लाई त्यती धेरै मन पर्नुको करण भन्नु पर्दा रमेश को ठुलो हतियार थियो। मलाई पनि धेरै ठुलो मोटो अनी लामो पेनिस मन पर्छ। त्यस पछी रमेश को फकिङ स्ट्यमिन पनि डेन्जर थियो। रमेश लगातार २५-३० मिनेट लगातार सेक्स गरी रहन सक्थ्यो। मलाई यसरी लामो मोटो पेनिस ले सेक्स गराउन अत्याधिक मन पर्थ्यो। कुनै कुनै दिन धेरै बेर सेक्स गर्न मन नलगेको बेलामा म रमेश को पेनिस लगभग १५ मिनेट जती चुसी दिन्थे अनी रमेश १०-१२ मिनेट सेक्स गरेर आफ्नो बिर्य मेरो मुखमा नै झरी दिन्थ्यो। अर्को कुरा मलाई केटा मान्छे हरुको बिर्य खान निकै मन पर्छ हल्का सुगन्धित अनी हल्का हल्का नुनिलो स्वाद आउने हुनाले म त रमेश को बिर्य १ थोपा पनि नझारी खान्थे। साथै रमेश लाई पनि मेरो पुतली चाटन तथा दुध चुस्न धेरै मन पराउछ । यसरी किस गर्दै दुध चुस्दै पुतली चाटदै रमेश लाई सेक्स गर्न धेरै मन पर्छ।;यसरी नै हाम्रो दिनहरु बितिरहेको थियो। मलाई सेक्स लाइफ सबैको यस्तै होला जस्तो लगेको थ्यो। तर विवाह भये पछी आफ्नो नै श्रीमान सँग चाँही यस्तो धेरै मजा नहुने रहेछ। मेरो बुढा त एसो दुध म हात छाम्छुम गरेर २-४ मिनेट मा नै काम सकेर सुतिहाल्छन अनी म भने पहिलाको दिन हरु शम्झेर बसेको छु अनी मेरो बुढाको पेनिस पनि तेती गतिलो छैन। त्यो पनि २-४ दिन त अफिसको काम ले नै बेपत्ता हुने बानी छ मेरो बुदाको। तेसैले मेरो सेक्स को चाहना पुरा गर्न लाई मैले धेरै कोशीस गरी रहेकी छु। तेसैले मैले ब्याच्लर डिग्रिको पढाई पनि थालेको छु। यो २२ बर्शे जोबन मा मोज गर्न नपाय पछी यो जिन्दजी जिउनुको के अर्थ रह्यो र। तेशैले म आज कल अली गतिलो माल वाला सुर्क्क्षित मान्छे खोजिरहेको छु जो राम्रो स्त्ट्यामिना भएको होस अनी समाजदार होस। तेसैले क्यम्पस मा पनि म राम्रो साथी खोज्दै छु। साथै यो लुकेको समाज मा कथा लेखेर आफुले पनि सेक्स पर्त्नेर भेटेको कथा धेरै पढेकी हुनाले मैले पनि यो आफ्नो ब्यथा लेखेकी हुँ । शायद मैले पनि कोही न कोही त अबस्य राम्रो सेकेरेट सेक्स पर्ट्नर पाउने आसा गर्दै छु। कृपया हजुर हरु पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कमेन्ट मा आफ्नो ईमेल ठेगाना लेख्नु होला म हजुर हरुको ईमेल मा आफ्नो ठेगाना तथा फोन नम्बर पठाउला। यो कुरा अती नै गोप्य हुनु न्पर्छ अनी ब्ल्याक्मेलर हरु ले ट्राई नगरे पनि हुन्छ। धन्यवाद।
पत्रकारको सानी छोरी चिक्दा
उनिहरु हाम्रो घर मा भाडा मा बस्न थालेका पनि धेरै भो। पेसाले उनिहरुको बुढा बुढी दुबइ जना पत्रकार थिय. ति भाडामा बस्ने पत्रकार दाई को १ छोरा अनी २ छोरी थिए। ति छोरा छोरी हरु सानै बाट हाम्रो घर मा हुर्केक हुनाले तिनिहरु म सँग पनि धेरै नै घुल्मिल थिय । छोरी मध्ये कान्छी को नाम सुनिता थियो। सुनिता को उमेर भर्खर १३ बर्षा भको होला तर धेरै चन्चल थि यू। सधैं हामी सँगइ जिस्की रहन्थी सुनिता हामी सँग। सानी भये पनि यू ठुलो मान्छेले जस्ताइ जिस्की रहन्थी यू तर म भने तेती धेरै वास्ता गर्दिन थे । किनकी आफ्नो नै घर म हुर्केक केटा केटी हरु जतिनै ठुल भएपनी केटा केटी नै लाग्छ। हुन पनि उनिहरु शनै थिए । तेसैले म म त्यस्तो कुनै नराम्रा्ओ भावना थिएन उनिहरुमा।। पत्रकारको बुढा बुढी दुबइ जना जागिर गर्न दिनभरी बहिर हुन्थे तेशैले उनिहरुलाई राम्रो सँग पढेर बश है बहेर भन्ने अनी पढौने काम म नै गर्थे। उनिहरुको परिवार को राम्रै आम्दनी थियो।,। तेशैले उनिहरु सँग ल्याप्टप मोबाईल अनी ईन्टरनेट सबै थ्यो। सधैं भरी उनिहरु मोबाईल अनी नेट म नै ब्यस्त हुने गर्दथ्ये तर म भने उनिहरुलाई पढ है राम्रो सँग न्हनेर भन्ने गर्थे। दिन हरु यसरी नै बितिरहेक थिए। १ दिन्को कुर हो त्यो दिन म अली बेलुका मात्र घर फर्केको थिए सुनिता को बुवा मेरो कोठा तिर आउनु भो मैले सोधे केही काम छ कि दाई तर उहा न्याउरो अनुहार लगाउदै भन्न थालनु भो कि सुनिता आज स्कुल बाट घर फर्केकी छैन। खोइ कत गाई कता अब कता खोज्नु होला के गर्ने होल अनी कस्लाई भन्ने होला? आदी भन्दै करौनु थालनु भो। अनी हामीले स्कुल म संपर्क गरी साथीहरु सबैको बारेमा पत्त लगायौ। राती सम्म कुर पत्ता लगाउदै जा दा यू कुनै केटा साथीको बर्थडे मनाउन गएको कुरा खुलासा भो। हामी सिधै त्यो केटाको घर मा पुगदा त्याहा पनि त्यो केटा पनि घरअंा नभएको र उनिहरुले पनि खोजी गरी रहेको कुरा थाहा भयो। र हामी दुबइ तर्फको सबै जना मिलेर खोज्दै अनी पत्ता लगौदै जा दा उनिहरु अर्को किनइ साथीको घर मा बशेको कुरा थाहा भयो। हामी सिधै त्यो घर मा पुगेर उनिहरु कहाँ छन भनेर जबर्जस्ती सबै कोठाको धोकाहरु जबर्जस्ती खोलदी हेर्दा उनिहरु १ कोठामा दुबइ जन नाङै सुतिरहेक रहेछन ।अनी मैले दुबइ लाई कपडा लगाउन लग्एर घर लेराउन थाले तेही क्रम मा उनिहर्लाई उन्का बाबा हरुले धेरै पिटपाट अनी हप्की दप्की पनि गरे। साथै उनिहरुको मोबिल सेट पनि जफत गरी मलाई राख्न दिए। त्यस पछी मेरो नै बाईक को पछाडि रखेर राती २ बजे हामीहरु घर आयोउ । बाटोमा आउँदा सुनिता को शरीर म धेरै नै गर्मी भएको अनुभब गरेको थिए मैले । घर म पुगे पछी पनि उस्का बा आमा ले धेरै नै गाली गर्दै थिए तर मैले हल्ला नगर केही भको छैन कुर गुप चुप राख भनेर सुत्न गए।। अनी उनिहरु बाट खोसेको मोबाईल सेट मा के छ हेर्न थाले। मैले त पहिला विश्वाश पनि गर्न सकिन आज्कल क भुराभुरी जो यू क्लस मा पढ्ने को मोबाईल भरी नै पुरा पर ब्लु फिल्म ले भरेको रहेछ। यो सबै कुरा देखे पछी मलाई अन्दजा लगाउन धेरै बेर लागेन आज यिनिहरुले मोबाईल म ब्लु फिल्म हेर्दाइ मजाले चिकामरी खेलेछन भनेर। त्यस दिन देखी सुनिता लाई बहिर जान अनी स्कुल बाट ढिला घर फर्कन सख्त मनाई गरेक थ्ये उन्का बाउले। केही भएमा हेरेर मलाई खबर गर्न भनेका थिए उनक बाउले।
तर म भने आफ्नै घरअको माल ले अन्त चिकाउदै हिंडेको कुराले अच्म्मित भको थिय र कसरी आफुले पनि चिक्ने भन्ने कुरा को प्लान बनाउन थालेको थिए तेस्म्याथएे पनि भर्खर कि १३ ब्-१४ बर्ष कि मस्त माल। त्यो सम्पूर्ण घटना ले गर्द नै मेरो मन म यस्तो भावना आएको थियो। दिन्हरु बित्त्दै गयो कुरा हरु सबै सामान्य नै भयो र मैले बिस्तारै आफ्नो चिकमरी गर्ने काम को प्लान अगाडि बढाउदै गए। म उनिहरुको रुम म गैरह्न्थे अनी नेट मा मोबाईल मा जिस्की रहन्थे। १ दिन मैले उनिहरुले नेट्मा के के हेर्दा रहेछन भनेर इन्त्टर्नेट को हिस्ट्री हेरेको त म तीन छक परे किनकी त्यहा त सबै पोर्नो साईट रहेछ। त्यस पछी मैले सुनिता लाई यक्लाई हुँदा जिस्काउन थालथे। म भन्थे य् सुनिता मलाई पनि तेरो मोबाईल बाट इङ्लिस फिल्म हालिदेन भन्थे तर यू छैन भन्थी अनी म भन्थे तलाई चाहिन्छ भने मेरोमा छ हालिदिउ? यू हुन्छ भन्थी। १ दिन साचिनै मजाक मजाक मा मैले ३-४ वटा बेस्ट क्वालितिको ब्लु फिल्म हलिदे। अनी दोस्रो दिन सोधे कस्तो लाग्यो? यू केही बोलिन। १ दिन मैले भने फेरी केटा साथीकोमा बर्थ डे मनाउन जानेकी? उस्ले भन्थी नाई। अनी मैले भने म सँग बर्थ डे मनाउने त? उु चुप चाप बस्थी। अनी मैले सम्झाये उस्लाई हेर सुनिता सानो मान्छे घर छोडेर कतै जान हुँदैन बरु तलाई के चाहिन्छ यहाँ नै म ब्याबस्था गरिदिन्छु। उस्ले हुन्छ भनी। उस्लाई मैले भने बरु म छु नि त किन अन्त जान्छेस उस्ले मुखै खोलेर भनी तपाईं त अंकल जस्तो मान्छे तपाईं भएर के हुन्छ र? मैले भने अंकल जस्तो भएर के भो त म साचिकै अंकल त होइन नि। अनी मैले उस्लाई सिकये मेरो कोठा मा पढ्ने बहाना बनाएर आउ अनी हामी दुबइ जन मस्त इङ्लिस फिल्मा हेरुला। अर्को दिन सचिनै यू मेरो कोठामा किताब बिकेर आइ । उस्को बाबालेनै पढ्न हो भने त जा भनेर पर्ठायका रहेछन। मेरो कोठा मा सुनिता पस्ने बित्तिकै मैले कोठाको चुक्कुल लगए। अनी कम्प्युटरमा नयाँ हाइ डेफिनेसन ब्लु फिल्म लगए।
अनी हामी दुबइले हेर्न थालयोउ। यू लजले रातो हुँदै थि मैले जिस्काउदै भने त त एक्स्पेरिएन्के मान्छे लजौनु पर्दैन। यू त सिधै मेरो अङालोमा कसिन आइ। अनी त अब के चहियो र। मेरो धरै दिन देखिको चाहना पुर हुने भएको ले म त धेरै खुशी थिए। मैले पनि सिधै उस्लाई किस गर्दै भर्खर क साना साना गुच्छ जस्ता दुध मद्न थाले । मेर्४ो लदो पनि खपी नसक्नु भएर धदो भाको थ्यो। मैले बिस्तारै उस्को दुध माड्दै बिस्तारै बिस्तारै उस्को कपडा खोल्न थाले। यू पनि बिस्तारै कट्टु बाहिर बाटइ मेरो लाडो मुसार्न थालि।
मैले उस्लाई मेरो नै बेडमा सुतएर किस गर्दै उस्का साना सना दुध चुश्न थाले। यू भने आहा अह्हा भन्दै छत्पतौदै थि। म भने दुध चुस्दै अब उस्को पेन्ती भित्र हात हल्न थालेको थिए। बिस्तारै उस्को तलको सबै कपद खोली सके पछी मैले उस्को पुती म सिधै हेर्दाइ चाट्न थाले। पुती चाटदा चत्दा सुनिता ले धेरै नै पानी बगौन थालि अनी मैले बिस्त्रारै आफ्नो लाडो उस्को पुती तिर दल्न थाले तर अचम्म भो सुनिता जुरुक्क उठेर मेरो लाडो च्याप्प समातेर चुश्न थालि। मलाई पनि ब्लु फिल्म र सुनिता को चुसाईले गर्दा खपी नसक्नु भको थ्यो। १-२ मिनेट चुसे पछी मैले नै सुनिता लाई बेडमा सुताएर लाडो उन्को पुतिमा दल्न थाले। अनी केही समयए पछी बिस्तारइ पितिको मुखमा लाडो कोच्न थाले बिस्तारइ लडोको तुप्पो त छिर्यो ।।। अनी मैले बिस्त्रारै बल लगौदै लाडो भित्र बाहिर गर्न थाले। अनी यकै चोटि पुर धक्का लगएर पुरा फेदै शम्म छिराईदिय
एस पटक भनए सुनिता अलिक चिच्चैइ किनकी मेरो लाडो लामो अनी मोटो थियो। यसरी चिक्दै गर्दा लगभग १० मिनेट जती मैले यू माथि खप्टेर खुब लडो भित्र बहिर गरे तर सुनिता करौन थालि यू दुख्यो भन्दै थितर मैले लाडो नझिकिकन उस्लाई बोकेर मेरो छातीमा तसेर खुब उफरी उफरी चिके। लगभग २० मिनेट पछी मेरो माल झर्न लाग्यो मैले सुनिता लाई बेडमा राखे अनी मेरो फुशी सुनिता को मुखमा झरिदिय। तेश पछी सुनिता ले मेरो लाडो बिस्तारै चुसी दीइ मलाई भने लाडो नै सिरिङ्ग हुँदै सनु भएको अनुभब हुन थालयो। मैले पनि च्वाँक आवाज नै आउने गरी सुनिता को पुती चुसी दिए। तेश्पछी आफु लाई राम्रो सँग सम्हलेर सुस्मिता आफ्नो कोठा तिर लागि।
यो पहिलो दिन को चिकाई पछी सुनिता लाई सधैं मैले पढाउने बाहाना मा चिक्ने काम हुन थालयो। १-२ महिना त सुनिता लाई धेरै (दिन म २-४) चोटि नै चिक्न मन लग्थ्यो हामी भिभिन्न स्टाईलमा चिक्ने गर्थेउ। मलाई अनी सुनिता लाई मन पर्ने स्टाईल चाँही मैले उस्लाई अगाडि बोकेर छातीमा तसेर उफ्री उफ्री चिक्नु हो। किनकी सुनिता को वजन हल्का अनी सानो ज्यान अनी मेरो भारी अनी ठुलो शरीर को लागि यो स्टाइल धरेऐ नै मन परेको थियो। २-३ महिना पछी चाँही हामीले अली कन्त्रोल गरेर चिकामरी खेल्न थालेउ। साथै दिन मा १ पटक चिके पछी १-२ घण्टा पढाउने पनि गर्न थाले मैले। यसरी सुनिता को योन इच्छा पनि पुराघरअंा नै हुन थालेको ले पढाई म पनि राम्रो प्रगती गर्न थालि। उसैले भन्थी पहिला चिक्न नपाउदा खाली चिकाइको कल्पना गर्दैमा पढाई खराब भएको थ्यो तर आज कल घर मा नै जती बेला मन लाग्यो म सँग चिकी हाल्थी तेसैले उस्को थ्यान अब चिक्न भन्दा पढ्न पनि लगेको छ। उन्का घर मा पनि मैले पढाउदा सुनिता राम्रो पढ्न थालेकी र यता उता पनि न्भुल्ने भय्किले सबै जना खुशी छन।
क कस्लाई चिकियन जिन्दगीमा
म मेरो जीवनको एउटा कुर यहाँन लेख्दै छु जुन मेरो सत्य घटना हो। म १६ बर्षको थिएन। टेतिखेर मैले मेरो एस.एल.सी को एक्जाम सकेर बिदमा कहन जनेहोल वनेर सोचिरको थिएन, मेरी सानीमा मेरो घरमा आउनुवएछ। मेरी सानीमको नाम कृति थियो।
उहको घरमा २बर्सको छोरा,सानोबुवा अनी उह बस्नुहुन्थ्यो। सानोबुवा डेली अफिस जानुहुन्थ्यो र बेलुक ८बजेतिर आनुहुन्थ्यो। डिन्वेरए सानीमा एक्लै घरमा बस्नुहुन्थ्यो छोरो हरेर। उहालैइ म कृति दिदी वनेर बोलौथेन। पहिल बिहे नहुँदा त मेरी सानीमा एकदम स्लिम अन्द ब्युटिफुल हुनुहुन्थ्यो तर बिहे गरेर छोरा पएपछी त एकदम मोती हुनुवको थियो।
उहले मलाई बिदमा हिद मेरो घर जौ २४ दिन बस अनी फर्कनु वन्नु वयो। मैले आमलाई सोधेन उहले पनि ज वन्नुवो अनी म सानीमा सँग उहको घर गएन। उहको घर एकदम राम्रो थियो। कृति दिदिको घर गको २ दिन वएको थियो तेस्सै दिन बितिरको थियो दिन्वेरए दिदी सँग अनेक किसिम्क कुराहरु हुन्थे। कहिले लोवेक,कहिले पढाईक कुराहरु हुन्थे।
एक्दिन खान खैसकेर म टि.भी हेर्न थाले सानीमा वने किचनमा केही काम गरिर्ख्नु वको थियो अनी उहले मलाई बोलर वन्नुवो "बजार गएर दही लेर आउ आज दही खान मन लाग्यो" मैले हुन्छ वने र बजारतिर लगे। डही लिएर जाँदा सानीमा टि.भी हेर्दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनी दही किचनमा रखेर मपनी टि.भी रूम्तिर लगेन।
टि.भी हार्ड हेर्दाइ सानीमको छोरा सुतेको थियो उठेर रुन लाग्यो सानीमले कख्मा लिएर दुध ख्वौन लग्नुवो मैले वने चाडके आँखा लएर कृति दिदिको दुध्तिर हेरेन उहले मक्सी लगाउनुवको थियो मक्सिको माथिबाट उहक ठुल ठुल दुध निकल्दै छोरालाई चुसौन लग्नुवो। सानीमको दुध देखेर मलाई वने कस्तो मज लाग्यो। उहले छोरालाई दुध चुसौद खेरी नै छोरो फेरी निदैसकेछ। अनी फेरी हामी टि.भी हेर्न थालएउ।
टि.भी हेर्दाखेरी त्यह एउटा किस्स को स्केने आयो मलाई वने लज लाग्यो त्यो हेरेर सानीमले मुस्कुरौदै मेरो मुख्मा हेर्नु वो म त लज्ले लाल लाल वएन। उहले एक्कासी मलाई सोध्नु वो कहिले किस्स गरेको छ कि छैन? मैले छैन वने उह हास्नुवो। टेस्पछी मैले छनेल चेन्ज गरेन अनी सानीमले वन्नु वो बाबु मेरो धद दुखेको पनि छ अनी चिलकोनी छ थोरै मलिस गर्देउ न वन्नुवो मैले हुन्छ वनेर उहको धद मलिस गर्न उहको बेद्तिर गए। सानीमा बेद्मा घोप्तो परेर सुत्नुवो अनी म उहको छेउमा गएर उहको धद थिच्न थालेन।
म ढद थिच्दै थिएन उहले धद कनौनपनी वन्नुवो अनी मैले मक्सिको माथितिर बाट हत हलेर धद कन्यैदिये मलाई एकदम मज अैरको थियो उहको धद मलिश गर्द उहान मोती वकोले गर्द व्यास व्यास मासु थिच्न मज थियो।
ठिच्द थिच्दै मैले उहको चक पनि छुदै गएन अनी चक पनि थिचेन उहले केही वन्नुवएन। अनी मैले बिस्तारै उहको तिघ्र तिर छुदै गएन अनी तिघ्र पनि मलिस गरेन तेस्पछी मैले बिस्तारै उहको पुतिको छेउमा हत पुर्यये अनी छोए लुग बहिरबाट छोको वएर होल अलिकती रौ जस्तो गुजुक्क थियो। मैले उहको पुती छमेपछी उहले क् गरेको वन्नुवो अनी मैले मलिस गरेको वने उह मुस्कुरौदै वन्नुवो क छोको त ? मैले वने कहाँ छोए र वन्नुहुन्छ वने त्यह पनि मलिस गर्दिउ? अनी उहले ल ठीक छ फेरी मलिस गर वन्नुवो मेरो लदो वने अगिनै सानीमको दुध देखे देखिनै थन्केको थियो झन अहिले मोतो उठेको चक्को छेउमा गएर मलिस गर्द त मलाई खपिनस्क्नु वो अनी मैले बिस्तारै सानीमको मक्सी मुनिबाट हत छिरौदै उहको पुतिसम्मा पुर्यए।
सानीमको पुती त सिधै वेते उन्देर्वेर पनि लौनुवको रहेनछ ततो र चिप्लो झोल आएको रहेछ उहको पुतिबाट अनी सानीमा झसँग हुँदै वन्नु वो क गर्छ कहन हत हलेको? मैले सानीमलाई वने चिक्न मन लको कुर अनी उहले मुस्कुरौदै मक्सी माथितिर सर्नु वो ओहो मत छक्क परेन सानीमको पुती देखेर कती कलाई वुत्ल थिए। अनी मैले पनि पैन्बाट आफ्नो पुरुस्लाई निकलेर सानीमको पुतिमा घुसरे तेस्पछी त मलाई स्वोर्गिय आनन्दको आनुभुती वयो। उहलेपनी आह गरेर लामो सस लिनुवो।
मैले लदोलाई जोर्सित सानीमको पुतिमा धकेलेन मजले ख्वस्स गरेर पस्यो आह मोतो मान्छेको पुती चिक्न त सर्है मज पो आउने रछ मैले थाहा पाएन।
सानीमलाई उत्तनो परेर उहक ठुल दुध मद्दै पुतिमा थेल्न थालेन उह वने बिस्तारै करौन थालनुवो अाअह ओह्ह्हो अाऐे एईीआ अली मजसँग थेल है वन्दै हुनुहुन्थ्यो उह मैले पनि जोश्मा बेस्कन थेलिरको थिएन
मजसँग थेल्दै दुध पनि चुस्दै गर्न थालेन एक्छिन पछी मेरो बिर्य झर्यो अनी सानीमको पनि झर्यो उह त उथ्नै सक्नुवएन लस्त्मा मैले बेस्कन धक्क दिएको थिएन
टेस्पछी मैले लदो सानीमको पुतिबाट बहिर निकले अनी एक्छिन्पछी सानीमले उठेर हाँस्दै वन्नुवयो पुरुष त दाङएर रहेछनी बाबुको त मलाई लज लाग्यो म हसिरहेन। सानीमा उठेर पुती पुछ्न थालनुवो मेरो लदो वने उहको चक देखेर थन्किरको थियो मैले पनि उठेर सानीमको चक्मा लदो घुसरेन। सानीमको चक्त ठुलो थियो पहिलत लदो छिरेन थुक लर खदेपछी छिर्यो।
अनी झन थेले ठुलो चक्मा चिक्द त पुतिमा चिकेजती नै मज आउनेरछ एक्छिन्पछी मेरो ब्ìर्य सानीमको चक्मा झर्यो। यस्तै गरी त्यो दिन ४ चोटि दिफ्फेरेन्ट पोसितिओन्मा मैले सानीमलाई चिकेन सानीमको पुतिबाट छोरा निक्लेको वनेर पत्यौन गर्हो थियो किनकी उहको पुती तिघ्त थियो।
टेस्दिन्देखी म सानीमकोमा ५ दिन बसे र दिन्नै उहालैइ चिकिरहेन्।अनी जहिले बिद हुन्छ म घरबाट सानीमको घरमा गैहल्छु उहालैइ चिक्न
फेरी हामी चिकमरी खेल्न थालेउ
हाम्रो फेमिलीमा सबैजनको जोब थियो केबल म थिएन पढ्ने मात्र अनी दिन्वेरए रूम मनै बस्ने। डिउसो सधैं म रूम्मा एक्लै हुन्थेन सधैं पढेर बस्थेन।
एक्दिन्को कुर हो सधैं जस्ताइ म कलेज बाट आएर खान खैसकेपछी पढ्न लगेको थिएन्,तेहिबेला घरबेती आएर मलाई वन्नुवयो"बाबु घरमा एसो याद गर है आज हामी सबैजन बहिर जन लगेको सङ्य मात्रै छे बेलुक हामी आउन ढिलो हुन्छ होल।" मैले हुन्छ वने र उहहरु जानुवयो।
टेस्पछी पनि म पढ्न थालेन। एक्छिन टि.भी पनि हियर अनी फेरी पढ्न थालेन। एक्छिन पछी सङ्य आएर मलाई बोलयिन उन्ले वनिन कि कम्प्युटर क् वयो क् ओन नै हुँदैन हेर्दिनुस् न, मैले हुन्छ वने अनी उन्को पछी लगेर उन्को रूम्तिर गएन।
एउटा भिडियो मैले ओन गरिहले। एउटा केटा आएर केटीको लुग फुकलेर फतफत चिक्न थालिहाल्यो। मलाई वने मज लाग्यो अनी थोरै लज पनि लाग्यो र एउटा कुर २ बर्षदेखी मेरो मन्मा खेलिरन्थ्यो कि केटी हरु ब्लु फिल्म हेर्छन कि हेर्दाइनन वनेर तर तेही दिन मैले तेस्को अन्स्वेर पैहलेन। टेस्पछी म सङ्यको केही नजिक गएर सोधेन तिमीपनी एस्तो फिल्म हेर्छेउ? उस्ले लज
टेतिखेर मेरो वने लदो थन्किएर खपिनस्क्नु वको थियो र मैले आफुलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन अनी उस्लाई बिस्तारै समत्न पुगेन। उस्ले क् गर्न लको वनी मैले वने प्लिज एक्चोटएे चिकौ न वने तर यू नै वन्दै पर जन लागि तर मेर हत्ले उस्लाई बेस्मरी समती सकेक थिए
उस्को पुती वारीपरी कलाई वुत्लहरु थिए मैले उस्क बूब्स चुस्न थालेन अनी मेरो हत्को औंला उस्को पुती वित्र घुसरे उस्को पुती चिसो वैसकेको रहेछ चिप्लो केही झोल आको थियो। मैले उस्को पुती एक्छिन सम्मा घोलेन अनी त यू एकदम एमोतिओन्मा आएर वन्न थालि ओह फुक्क मी! प्लिज फुक्क मी! फुक्क माइ पुषसी! टेस्पछी मैले मेरो लदोलाई सङ्यको पुतितिर धकेलेन एक्चोटइमा त छिरेन उस्को पुती एकदम तिघ्त थियो। फेरी मैले बल गरेर छिरएन त आध लदो छिर्यो यू करौन थालि अाइय दुख्यो ऊहो वनेर मलाई वने अझ जोश आयो अनी अझ बल गरेर ल्वम्मा घुसरे अनी पुरै लदो वित्र पस्यो तेतिखेर तम अलाई कहाँ गये जस्तो लाग्यो कहिली अगको एकदम स्वर्ग गएजस्तै वयो। अनी त यू झन करै अा ओह्ह्ह्ह हुन्म नै नचिकन दुख्यो नकल वन्न थालि मैले वने नसुने झैन गरी अझ झ्यम क झ्यम थोकिरहेन।
कारीब ५मिनट जती मैले मेरो लदोलाई धकेलिरहेन अनी मेरो बिर्य झर्न लाग्यो मैले उस्को मुख्मा हल्न खोजेन तर उस्ले मानिन् अनी तेही नै झरेन अनी उशो पनि बिर्य झ्र्यो।तेस्पछी त दुबइ जन अन्गालो हलेर दल्लो पारीरहेउ अनी म उठेन तर सङ्य वने एक्छिन सम्मा पनि उथ्न सकिन
जीवनमा सबैवन्द स्वोर्गिय आनन्द दिएकोमा मलाईपनी थ्याँक्स वनी अनी पुती पुछ ।।। ।पक्ष परेर बथ्रूम जन लागि म वने आफ्नो रूम्मा झरेन। टेस्पछी हामी जहिले पनि त्यस्तो मौका मिल्यो वने चिक्थेउन
तेस्पची मैले "ही।।।।।" भ्ने। अनी उन्ले पनि "ही" भनिन। बस्न त्यहाँन भनी सोफ तिर औन्लले देखौदै भनिन रोजिनले। सुश्मा सोफ म गएर बसिन। उन्ले तिघ्त जिन्स को पन्त र तिघ्त टीसर्ट लगएकी थिन्न। उन्को सन सन दुध्को पोको अलक्कै छुट्टीएक थीए। उन्को शरीरको बनओत नै चर्लङै छुट्टीएको थीयो। म चन्ही तेही हेर्दाइ थुक निल्ल थालेन। ओि तैले एसरी आकाशमत मलाई किन यहाँन बोलएकी नि? अघी भन्छु भनेको होइन? सुश्मा ले प्रश्न गरिन। तेसै तलाई भेट्न मन्न लगेर बोलएको नि किन हम्ले अब तलाई बोलौन पनि नहुने भयो कि क्य हो हन? रोजिनले जवाफ दीईन्न। ह्याअ।।। तेसो होइन क् मात्रै किन हो भनेको क्य। ए ठिकै छ सछी नै मैले तिमीलाई भेट्न बोलएको हो क्। ल मेरो दाई सँग गफ्फ गर्दै बस म कफि बनएर लिएर आउन्छु नि ल। सुश्मा ले हुन्छ भनिन। अनी रोजिन किचेन तिर लगिन्न।
मैले उनी सँग गफ्फ गर्ने बाटो खोजे अनी थाहा नभये जसरी "तिम्रो नाम क् हो?" भनी सोधेन। सुश्मा, उन्ले भनिन। अनी लस्त नेम चन्ही क् हो नि? "सेर्प" अनी हजुरको नाम चनी क् हो नि? "सन्जएे, सञ्जय के.सी", मैले भने। अा।।। फेरी मैले सोधेन, तिमी पनि रोजिन सँगइ पढ्छौ हो? हजुर, रोजिन र म एउटै क्लास अनी एउटै सेक्तिओन म पढ्चौन। रोजिन त बोर्ड टोप्पेर हो हाम्रो स्कुल को अन्द "शे इज माइ बेस्ट फ्रेन्ड। षे इज सो फ्रेन्डली, ब्रिल्लिअन्त अन्द को-ओपेरतिवे तू। आइ लभ हेर वेरी मुच। ठत इज थे रेअसन व्हाइ इ'म हियर राईट नोव विथ हेर वन कल। इ'म अल्वय्स रिडएे तो हेल्प हेर अत अनी टाईम अत अनी मोमेन्त।" सुश्मा ले जवाफ दीईन्न्।सुन्ले ईंग्लिश फुरएको देखेर म त दाङ परेरा हेरिरहे उन्को मुख्मा मात्रै। अनी दाई ह्जुर्ल क् भयो? सुश्मा ले सोधिन्न। म झसँग भएर होइन केही होइन, तिम्रो ईंग्लिश देखेर अछामम्मित भएको नि भनी प्रसम्स गरिदीईएको त उनी खुशी हुँदै "ठन्क्योउ दादा" भन्दै अनी हजुर चाँही कती क्लास म पढ्नु हुन्छ नि? सोधिन्न। म ११ क्लास म पढ्दै छु। एस्पली पोखर बाट स्।ल्।क दीएर यहाँन कलेज पढ्न भनी यहाँ आएको। अा।।। होर अनी हजुरको प्धै कस्तो चलाई छ त। एकदमएे राम्रो चल्दै छ। तेस्पची मैले रोजिनलाई केही बहन बनएर एक्चिन बहिर जन आग्ग्रह गर्दै एउटा मेसगे पथएन उन्को मोबाईल म।
अनी मैले भने टि.भी हेर्ने हो। हुन्छ हेरौन न त उन्ले भनिन। तेस्पची मैले टि.भी खोले। कस्तो सन्जोग "स्तर गोल्ड" च्यानल म "अशिक", अ सेक्सी मुभि दीईरहेको रहेछ। अनी मैले भने एही फिल्म हेर्ने हुन्छ। उन्ले पनि हुन्छ भनिन्न। हिरो हिरोईन अन्गालो हलेको, किस गरेको अनी यस्तै यस्तै काउकुती अनी एमोतिओन गराउने स्केने हरु दीईरहेको थीयो। केही बेर्‍ टि.भी हियर पछी मैले आउ न एहिन बेद म सुतेर हेर, सोफ म बस्द बस्द खुट्टा पत्त्यार नै लगिसक्यो होल। लाज्ज मन्दै होइन एहिन ठीक छ भनिन्न। फेरी मैले धेरै कर्‍ गरेपची उन्ले अन्तत बेद म आउन रजी भयीन्न। उनी बेद म अैइन्न र लज्ज अनी अफ्थेरो मन्दै चेउ म अलक्क सुतेर टि.भी हेर्न थालिन्न। उन्को ध्द्कन तेज्ज हुनुको साथै फके पुरै रातो भएको थियो। यो द्रिश्य देखेर मेरो भाई जुर्मुर्यौन थालयो
कुरा चिकामरी को
शनिबार को दिन थियो। म मस्त सुतेको थिए। मेरो निन्द्रा खुलेको थियो। एफ.एम पनि बजेको थिएन। झ्याल खुल्ल थियो घाम ले मेरो आँखा तिर्मिरएको थियो। बिहानि ६अं को घाम ६अल्दै सुत्न मलाई निकै मज लगिरहेको थियो। णिश नुहएर चिया बसल्न गयी। णिश चिया बसलेर आएए अनी सदझै ऐन(मिरर)हेरेर आफ्न आँखामा गजल र लिप्स म कलर लगै। उस्लाई जैले पनि राम्री वर बस्नुपर्थ्यो।
णिश वखर १५ कि हुनाले उस्क स्तन सुन्तल जत्र लाग्दथे तर उस्को चक वने मजको थियो म एक्स्किते वए। घरमाइ असली माल राइ६ वनेर। केइ बेर्मै "लौन नि चिया उम्ल्यो क्यर" वन्दै निश दौददै किचन गयी। म झसँग वए। मेरो लिङ एकदम उतेजित थियो शायद पिसब ले पनि होल तेती सरो। तर मलाई निश एक्दुम राम्री र कमुक लग्न थालयो। मैलाई एउटा कुर म विश्वाश थियो कि आजसम्मा मैले कुनै तरुनिलाई पत्यौन नसकेको रेकोर्द थिएन। म तरुनी फसौन म नो १ थे हाम्रो ग्रुप म। अव णिश मेरो लागि चल्लेङे वयी। यू बैनी पनि वएकले हार्ड चल्लेङे थियो यो मेरो लागि।
णिश ले चिया मलाई दियी। हाम्रो कोठा अटो लोक्क थियो। म अब आफ्नी बैनिलाई सेदुके गर्न तिर लगे। मैले चिया पिउदै वने " कन्६ी यताइ बस न।" " किन दादा" वन्दै यू मेरो चेउ म बसी। मैले वने" त त निकै राम्री देखि६अस त।" निश लाज्ले वुटुक्काइ वाइ। अनी बोली" उह होल नि?" मैले " सचै वनेको तलाई गजल निकै सुहौदोरै६अ, आज त त निकै राम्री देखि६अस वनेको" वन्दै उस्को गल समते अनी" तलाई नकली बैश ल६ है तलाई"वन्दै गल को मासु चिमोते। णिश सरम ले रतै वयी अनी" छि दादा पनि" वन्दै किचन तिर दौदी। म पनि नुहएर फ्रेश हुन तिर लगे। अनी बथ्रूम म उसग सम्भोग गरेको कल्पना गर्दै हस्त्मैथुन गरे। एस्पतक म ६ितै पाटन वये र बिर्य पनि धेरै निस्क्यो।मा मन्मनै खुशी थे निशको रेअक्त देखेर।
डिन्वर म बहिनी सग चेद्चद गर्न थाले। बेलुकी अचम्म वो। बैनी ले खान पस्कदै थिएए। हामी सगै खान खान बसेक थियौ। बैनी स्किर्त आफ्नो घुदमा सरकार पिसब फेर्न लगेजस्तै गरी बसेकी थि। उस्ले खान थप्दखेरी बिस्तारै उस्को दुई तिघ्रमा दबिएको स्किर्त उस्कै तिग्र तिर सर्यो र मलाई उस्को वित्र तिरको कालो चिज को दर्शन वो। मलाई थम्यौन गाह्रो वो त्यो कालो उस्को योउनी हो य पन्तएे। म तेइ एक्तक्ले हेर्दाइ थिए। मलाई पत्तै वएन मेरी बैनिले कतिखेर सिर उथयी। उस्लाई थाहा व६ क्यर। उस्ले आफ्नो स्किर्त मिलयी। (विसित नेपाली इन्स्केन्त साईट डेली ४ मोरे स्तोरिएस) खान खाएप६ी सुत्नेबेलामा मैले बोले" कन्६ी त त जवन वै६अस, तेर कोइ ब्फ ६अन?" निश कर्के नजरले मलाई हेरेर बोली" नै ६ैनन," निश लाई हेर्दा स्पस्त थाहा लग्थ्यो कि उस्ले मेरो मन्सएे बुझेकी एस्। किनकी यू मसग परै जस्ताइ गरी कुर गर्दै थिएए र यू दरये जस्ती पनि देखिन्थी।
अनी मैले कुर अगी बदए"तैले वनेप६ी सेक्स गरेकी ६ैनस नि" निश रतै वयी" एस्त कुर नगरनु न लज लग्६अ" म बोले" ए वनेप६ी गरेकी ६अस।" निश बोलि"छी दादा त्यस्तो फोहोरी कुर किन गर्नु" म बोले" म पनि तेसै वन्थे तर एक्पतक गरेप६ी थाहा हुदोरै६अ। " निकै बेर प६ी निश बोली "हजुर त सोर मन्६े , ६ोरी मन्६े लाई जस्तो कहाँ हुन्६ र न त प्रेग्नन्त हुने दर न समाज को दर" म बोले" उम लती कोन्दोम को काम तलाई थाहा ६ैन कि क्य हो" बैनी लज्ले रतै वयी। मैले वने" हेर न कन्६ी मलाई त बनी नै लगे६ एक हप्ता वो मैले सेक्स नगरेको! हेर न कस्तो बिदम्बन बैर जनै नमिल्ने।" निश चुप वयी। म फेरी बोले" मलाई त वाक्क लगेथ्यो धन्न त ६अस र तलाई हेरेर चित्त बुझौ६ु। कन्६ी त निकै राम्री र तरुनी वएको त मैले आजै थाहा पको हुँ। वास्तवमै त जत्रै केटी सग मैले धेरै सेक्स गरेको ६ु। टलाई पनि जवानी ले ६ोए६अ" निश अझ चुप थिएए। म बोले" कन्६ी अैज न सगै सुतौ आज" कन्६ी बोली" नै दादा" मैले सोधे "किन" बैनिले वनी " सगुरो हुन्६अ" म बोले"लती मिलर गर्ने हो वने के को सगुरो हुन्६अ" छि दादा म त सुत्दिन तपाईंसग। म"दद ले वनेको नि मन्दिनस, हेर एक्दुम रमाइलो हुन्६अ। हामी गोप्य नै रखौल। हेर न दादा को माया को लाग्दैन?" मैले निकै फकएप६ी निश ले बोली" म प्रेग्नन्त वये वने नि?" म बोले "लती तेरो दाई सग कोन्दोम ६अदै एस् नि ल अैज" निश खै दर ले हो य मेरो मायाले य उस्को वित्री चाहनले" दादा पनि! मुम्मी ले थाहा पौनु वो वने नि!" वन्दै म तिर आएए। मैले उस्को हथ समौदै वने "एस्तो कुर मुम लाई न त वन्६ेस न म? हामी बहेक को नै एस् र?" णिश मेरो बिस्तार्मा आएप६ी मैले उस्को नरम गल र गर्दन म हथ दुलए। मैले निकै सेक्स गरेथे तर एस्तो नरम स्किन को महसुस गरेको थिएएन।
णिश निकै लजएकी थि तर म पनि नङै(तर लिङ वने ६ोपिको थिए पन्तएे ले) वएप६ी उस्लाई नग्यौन सजिलो वो। मैले उस्को टीसर्ट र ब्र खोले प६ी उस्क दुई सुन्तल क दन को दर्शन वो। मैले अफुलाई वग्यमनी थने। कती सुन्दर र फोर्म म थे ति दन। मलाई हथ लग्न पनि लोभ लाग्यो। मैले आफ्नो मुख लगेर उस्को सन मुन्त लाई हल्क चुसेको मात्र के थे। णिश को श्वास तेज वो र उस्क दन पनि फुल्न थालयो। मैले आफ्नो एउटा हथ उस्को स्किर्त वित्र लगेर उस्को योउनी समौन खोजे तर उस्ले आफ्न हथ्ले ६ेक्दै थि। मैले उस्क हतलाई मेरो पन्तएे वित्र हलिदिए। तर निश ले मेरो लिङ म ६ुने बितिकै आगो बाट हाथ निकले झै आफ्न हथ निकली। मैले आफ्नो पन्तएे खोलेर उस्लाई आफ्नो वएन्कर लिङ देखैदे। उस्को सतै गयो। यू बोली" नै दादा म सक्दिन प्लिज" म बोले" धत लती मलाई तेरो माया लाग्दैन र मैले त जस्ता धेरैसग सेक्स गरेर आनन्द देको ६ु नदर। बरु मलाई तेरो योउनी हेर्न दे।" मैले उस्को स्किर्त खोलिदे। मलाई थाहा वो मैले पैला देखेको त्यो कालो चिज उस्को पन्तएे रहे६अ। जाभा मैले बैनिको पन्तएे पनि खोले मेरो मुटु को धद्कन तेज वो। मैले एस्तो सुन्दर योउनी कैले देखेको थिन। हल्क रौ पलको। सानो जुरो र जोडीएक उस्क पत्र क्य सुन्दर थियो। मैले चमे आह कती नरम। मैले दुइत औलले उस्को पत्र खोलेर उस्को दुलो हियर। यो दुलो नवइ छिद्र जस्तो लाग्दथ्यो। मैले उस्ले रेसिस्त गर्दगर्दै पनि उस्को योउनी चत्न थाले। उस्को योउनी म मैले जिब्रो पनि चलए। अनी एक औंला मुस्किल ले चिरए।
मैले बिस्तारै दुई औंला हलेर औंला वित्र बहिर गरिदिए। उस्ले दुइपतक सम्मा योउनी बाट पनि निकली। यू आफ्न तिघ्र उचलेर आँखा बन्द गरेर सिर हलएर र उम उम सोउन्द निकलेर मस्ती लिदै थि। मलाई लाग्यो बैनिको योउनिले मेरो लिङ अव लिना सक्६अ। टव मैले उस्को सानो दुलोमा लिङ रखर झद्क मर्न लगे तर ३४ पटक चिप्लेर गयो। ढेरै पर्यस प६ी मेरो मुन्द ६िर्यो। अनी बैनी मेरो लिङ ले उस्को योउनी को विर्गिनिती तोदेप६ी रुन थालि। मैले उस्लाई मोइ गर्दै फकये र हल्क झत्क मरे। ५ मिन प६ी निश ले पनि साथ् देप६ी म पाटन हुन धेरै बेर लगेन। ट्यो रात ३ पटक र तेस्प६ी १२ दिन्सम्मा मैले उसग सम्वोग गरे। कोर्फुए ले गर्द मैले कोन्दोम पनि धोइ पखली दुइपतक उसे गर्नुपर्‍यो। माघ १९ गते मैले निशलाई उस्को चक्मा पनि लिङ हल्ने दौ म सेदुके गर्दै वनेको थे "कन्६ी तेरो चक त क्य मस्त राम्रो राइ६अ" उस्ले तर चक म हल्न वने दिएकी थिन। तर वोलिपल्त सव नोर्मल वो दादा मुम पनि आए। हद्तल फिर्त वो ज्ञानेन्द्र राजाको हैसियता ले पाटन हुने वो। डिन नोर्मल वयो। तर तेस्को लग्वग ४ सल्प६ी अर्थत अस्ती फेरी माओईस्ट को हद्तल सुरु वो। दादा काठमाडौं म बैनिलाई क्याम्पस चूसे गर्न जानुवकोले घर म म अनी मुम थियौ। आज ३ दिन हुँदा पनि हद्तल कयम थियो। शनिबार को दिन थ्यो मेरी मुम मलाई चिया दिदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई तेतिबेला रोमन्तिक फील वो जाभा मैले मुम ले गीत गको सुने"हुम दोनो एक कम्रे मी बन्द हे" मुम्लाई निकै सेक्सी देखिनुवव्ह्यो शायद चलिसे बैश ले होल। म नोर्मल हुन खोजे तर मेरो लिङ खद वएको थियो। मेरी मुम निकै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो र कमुक पनि। मैले मुम लाई सेदुके गर्नलाई वने" मुम यू र् लूकिङ योउङ वेरी ब्युटिफुल लदी" शे ब्लुशेद अन्द सैद्"रेअल्ली! बुत योर दादा नेवेर करे मी" आइ सैद" हे इज फूलिश" शे सैद "होव?" इफ आइ वेरे हिम आइ नेवेर मिस्सेद तो लभ यू " शे सैद" यू नौघ्ती सोन यू आर क्लेवर" थेन आइ सैद " बुत मुम आइ वान्ट तो बे विसे।।कन यू गिवे मी चन्के तो बे विसे" मेरो कुर सुनेर मुम हाँस्दै वित्र सुत्ने रूम म जानु वो र म पनि प६ी लगे। मलाई थाहा थियो मेरी मुम स्मार्ट हुनुहुन्६ र तेसैले बुझ्नु वो ।जवन लिङ एती सजिलै र गोप्य रुप म पौनु वग्य हो। वास्तव म यो मेरो रहर थेन तरुनी ६ोदेर आफ्नी मुम को प६ी लग्नु तर बिदम्बन देशकाइ एस्तो गती एस्। के थाहा मेरी बैनी पनि दादा सग सुत्नु पर्‍यो होल काठमाडौं को होटेल म बस्नुपर्द। मलाई लग्६ नेपाल म सबै नेता हरु आफ्नै धर्ती मत माथि त६अद्म६अद गरी बलत्कर गर्६अन वने मैले त आफ्नी मुम लाई मनएर नै सेक्स गर्ने६ु एस्मा के नै गलत एस् र?मेरो सलह सबै पब्लिक लाई पनि एस् नेपाल क नेता को प६ी लग्नु वन्द बरु आफ्नै मुम सग सेक्स गर्नु मलाई लग्६ तर तपाईंहरु बन्द वने गरिरहनु एस्तो बेलामा। यो सचो हो कि नयाँ आएक नेताहरु धर्ती माथि नयाँ तरिकले बलत्कर गर्ने६अन।
लाडो समतेर ख्वाप्प हाले
यो कुर भन्नु हुने नहुने मलाई केइ त्यहाँ छैन तर पनि म लेख्दै छु अज यो ब्लग मार्फत कुर अज भन्दा १० बर्ष अगाडि को हो तेती बेला म भर्खर १७ बर्ष को थिए म मामा सँग गधी म झापा पुगेको थिए त्यहाँ एउटा क्त भेतियी मुन राइ भन्ने (ठेगाना म बताउन चाहन्न)ममा को गधी सधैं ककद्वित्त बाट क्त्म को लागि चुथ्यो म मामा सँगइ ड्राइभर को सिट पछाडि बसेर यात्रा गदै थिए शायद दशै को अस्तमी को दिन थियो होल मामा गधी पूजा गर्नु पर्ने भये कोले गर्द देउसो ३ बजए नै हिंड्नु भयो गाडी म दुई जन हेल्पेर र म अनी मामा मात्र थेएउ सबै जन लाई जहाँ बसे पनि फ्री भनेजस्तो तेस्पची पथ्री अैपुगेपची एउटा २०-२२ बर्ष कि मोङूल फके कि क्त ले गाडी लाई हात दी मामा ले गाडी रोक्नु भयो अनी त्यो क्त चढि कहाँ जने भनेको क्त्म जने भनी अनी भाडा को रते हुन थालयो फर्कने मान्छे कोइ थिएन उस्ले ३०० म कुर मिलाई अनी गधी चढि तेत्रो खाली सिट छोडेर मसँग आएर बसी शायद उस्ले मलाई पनि यात्राु सम्झिएको हुनु पर्छ किन भने म अली वेल्ल द्रेस्सेद थिए गाडी को स्टाफ भन्दा। अनी कुर सुरु हुन थालयो कोशी बर्‍अगे सम्मा ऐपुग्द हाम्रो गाडी म १० जन मान्छे भएक थिए अनी त्यहाँ बाट बर्माझिय म चिया चएर हामी क्त्म को बाटो लग्एउ तेस्पची त्यो सँग परिचय भयो उस्को नाम मुन राइ राइछ अनी घर चै इल्लम तिर रे तेस्पची उसँग कुर हुँदै जड उस्को हुस्बन्द यू बर्ष पछी टिका को भोलिपल्त क्त्म आउँदै राइछ अनी यू उस्को बुद लाई रेक गर्न गएकी राइछ।
उसँग थापा कुर कनी हुँदै जड उस्को लोग्ने र उस्को बिहे भएको ३ मैन म बैर गएको राइछ काम गर्न दुबइ अनी उसँग कुर कनी गर्दै जध अध्यरो हुँदै गयो यू पनि मेरो नजिक तसिएर बसी किन कि सिदे को सिट म एउटा जध्य थियो उस्ले कर्के आँखा ल गएर हेर्दाइ थियो अनी उस्ले लाहान नपुग्दै दाई तपाईं यता बस्नु न ल भनी रिक्वेस्ट गरी र मैलए उस्लाई घ्यल तिर को सिट हुन्छ भन्दै छोडिदिये अनी हामी ले लल्गध म खान खाएउ मैलए उस्लाई पनि स्टाफ खान खुवये अनी मामा ले मलाई चाडके आँखा ले हेर्नु भयो म्नैलए मामा लाई त्यहाँ नभएको जस्तो ईशारा गर्न लगये अनी यू खान खैसकेपची गाडी म सुती अनी टाउको मेरो कुम म रखेर निदै अनी मलाई एक्चिन त केइ लगेन तेस्पची एक्दुम क् गरुम क् गरुम भयो र बिस्तार त्यहाँ नपौने गरी उस्को घती पछाडि बाट हत ले उस्लाई आङलो मरे अनी यू उठेको जस्तो लाग्यो र हत झिक्न खोजेको त उल्तै हत समतेर तनी निन्द्राइमा एसो उस्को अनुहार म हेरेको त निदै राखेको राइछ अनी मैलए मामा लाई लाईट ओफ्फ गर्न ईशारा गरे मामा ले पनि हाँस्दै लाईट ओफ्फ गर्नु भयो र मधुरो गीत लगाउनु भयो त्यो गीत शायद चाइना गते को चम्मा चम्मा थियो होल तेती बेला तेइ गीत को लहर थियो अनी मैलए त्यहाँ नपाएको जसरी उस्को पोतिलो दुध म हथ रखेर निदएको जस्तो गरे तेस्पची मैलए बैर बाट नै उस्को दुध को मुन्त खेलौन थन्ले यू सत्पतै मैलए त उठेर हत फल्छे होल भनेको त झन खुट्टा चाडके रहेर मेरो कख्मै सुते दी ।अनी मैलए एसो हियर यू त मस्त निन्द्रा म पो राइछ मलाई झन सजिलो भयो मैलए अब उस्को एउटा होइन दुइोतै दुध को मुन्त खेलौदै थिएए यू झन कुक्रुक्क परे एसो हेरेको त उस्को निन्द्रा खुलेछ अनी मलाई हेरी र सरी मैलए तपाईंलाई दुक्ख दिये भनेर सिद्ध भाई मैलए इत्स ओके तपाईंलाई एसरी नै सजिलो हुन्छ भने सुत्नुस् मलाई निन्द्रा आएको छैन भने उस्ले तेसो भये ठीक छ भनेर हाँस्दै सुती अब मलाई क् गर्ने समाज म आएको थिएन मलाई फेरी उस्को दुदुह म खेल्ने इछ हुँदै थियो तर कसरी सुरु गर्ने त्यहाँ थिएन तेतिकै म उस्ले एउटा हर सिरनी लगै मेरो कख म उस्को हत ले मेरो सानो भाई लाई चुदै थियो जती उस्को हत ले चोयो तेती नै मेरो सानो भाई ठुलो हुँदै आयो। उस्ले तपाईंलाई सरो भयो हो भनी मैले छैन भने अनी एउटा हत उस्को करणग र पेत को जोर्ती म रखे उस्ले केइ भनिन अनी मैलए बिस्तारै हात लाई अगाडि बदौन्न थाले यू बाट केइ रेस्पोन्से नाएपची मैलए एक्कासी अगी कै जसरी उस्को दुध को मुन्त म हत रखे उस्ले केइ भनेन अनी उस्ले जेउ अलिकती चलाई मामा ले लूकिङ ग्लास बाट सबै देख्दै हुनुहुन्थ्यो काम लाई अली सजिलो बनैदिन मामा ले हल्क ब्रेक लगैदिनु भयो यू खस्न लागि मैलए दुबइ हत ले उस्लाई समते तर कहाँ परेछ भन्दा उस्को दुइोतै दुध म समत्न पुगेछु तेत्तिकै म मैलए उस्लाई सरी भने उस्ले पनि इत्स ओके भनी र मलाई अली कती शाहअस मिल्यो तेती बेला त्यहाँ भयो उस्को दुध त एक्दुम तिघ्त राइछ अनी मैलए उस्को दुध मध्न सुरु गरे। उस्को दुध म जती जती मध्दै थिए उस्ले मेरो सानो भाईलाई तेती नै जोद्ले थिच्दै थिएे म लाई अब अती भयो गाडी शायद चपुर पुगेको थियो होल अनी अब शाहअस ले मैलए उस्को टीसर्ट भित्र हत हले उस्को दुध ठीक्क एक हत म अत्ने थिए अनी मैलए उस्को दुध मद्न थाले तेस्पची यू पनि मलाई साथ् दिदै थी। टेस्पची हिम्मत अयो मलाई पनि र मैलए जक्केत फुकलेर उस्लाई ओदै दिये अनी मलाई साह्रै रमाइलो लाग्दै थियो उस्को दुध खेलौन पएको म अनी छ पुर म अग्नी यातायात को गाडी ले मान्छे किचेर बाटो बन्द भएको राइछ बाटो खुल्ने चत्कत थिएन र मैलए मामा लाई यता लज छैन बाटो नखुल्ने भयो सुत्नु पर्‍यो भने मामा ले सदहै बस्ने गरेको बागमती लज नगिकै राइछ मामा ले तेइ लग्नु भयो मैलए मुन लाई पनि जौ एक्चिन अरम गरुम भने यू मनेकी थिएेन मैलए कर गरेपची यू पनि अै हामी सँगइ लज म अनी मामा ले मलाई भन्ज तपाईंहरु दुई जन अरम गर्दै गर्नु म गधी खुल्यो भने तपाईंलाई कल गर्छु भन्नु भयो तेती बेला १०।३० भएको थियो अनी मामा सधैं बस्ने गरेको टि.भी – रूम १०४ नो को चबी दियो होटेल वल ले हामीलाई अनी मामा गधिमा जानु भयो म र मुन अनी खलसी मात्र भएु रूम म मैलए थैकै लगेको होल तिमी बस्दै गर म फ्रेश भएर औछु भने दुई वटा खथ थियो उस्ले पनि ठिकै छ भनी अनी म फ्रेश हुन गये तेस्पची म बैर निक्ले पछी यू बथ्रूम पसी अनी यू गये पछी खलसी पनि दाई गाडी को त्य्रे च्याट म राख्नु पर्ने छ म रखेर औछु भनेर गयो तेस्पची मुन बैर निक्ली बथ्रूम बाट अनी यू अली अत्तिछ अनी खलसी दाई खोइ त भनी मैले चिसो अर्डर गर्न गएको छ भन्दिये अनी यू अर्को खथ म बसी मलाई कत कत अगी को कुर यद अैरको थियो अनी मैलए यू कपाल कोर्दै थी मैलए उस्ले नदेख्ने गरी ढोका लोक्क गरे अनी यू नगिकै गएर बसेर भने अली उत सरत भनेर यू पनि सारी अनी म उस्को चेउ मै बसे मलाई अब कसरी क् गरुम हुँदै थियो तेतिकै म बत्ती घ्यप्प गयो तेइ मौका चोपेर मैलए मोबाईल खोजेको बहन म उस्को दुध चमे उस्ले पनि कुर बुजेछ क्यारे ऐलए खलसी दाई औछ अनी भनी मैलए आउँदैन भने र उस्को दुई ओतै दुध झ्यप्प समते अनी बिस्तारै मद्न थाले उस्ले लगएको टीसर्ट मैलए फुकलिदी अनी ब्र पनि तेस्पची उस्ले लगएको पेन पनि फुकली दी अध्यरो ले गर्द केइ देखिएको थिएएन अनी उस्ले पनि मेरो लुग खोल्दी अनी मेरो लुग पनि खोली सके पछी बत्ती आयो दुबइ जन नङै थिएु तेती बेला मैलए उस्को पुती देखे एउटा पनि रोउ राइनछ अनी मेरो भाई सनक्क भएर आयो मैअले उस्को पुती म हत पुर्यए अगी देखी दुध मद्न ले उस्को पुती म त भेल नै बगेको राइछ अनी उस्ले भनी अंमम्मा कती मोतो हो मेरो लदो जम्मा ४ इन्च को छ तर एक हत भरिने मोत्तो छ तेइ भएर उस्ले बिस्तारै चली अनी मैलए उस्लाई सोधे किन र तिम्रो हुस्बन्द को कत्रो थियो र उस्ले भने तपाईंको भन्दा त लामो छ तर एस्तो मोत्तो छैन भनी अनी मैअले किस्स गर्दै उस्को दुध मद्द्न थाले अब यू पनि सुस्केर हल्न थालि ओूउुउुउुउुउुउुउुउुउ गर्दै थे मुम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म हाअाअाअाअाअा गर्दै थी अनी उस्ले मेरो लदो हत म लिएर खेलाई दी अनी उस्ले बनी अब धेरै नतद्पौ भनी र मिलए उस्को पुती को मुख म लगेर थेले मोतो भएको ले गर्द चिरेन उस्ले भाई अैय भओ ………………… चिरेन छोड भनी मैलए तेतिकै म उस्को दुध फेरी मधै जोड ले एक धक्क मरे उस्ले अैय भनी मेरो लदो पुरै चिर्यो एस्बेला धेरै पछाडि भएर हो कि उस्को पुती बाट रगत आयो। …………… अनी उस्ले पनि बल गरेर मलाई आङलो मरे……………… अनी बल्ल मेरो लदो चिरेको मात्र थियो मामा को फोन अयो गाडी खुल्यो भनेर तेस्पची हामी रोकिएर लुग लगएर गाडी म गएु। उस्ले गधी म भनी तपाईंलाई र मलाई टाईम ले साथ् नदिएको भनेर अनी उस्ले मेरो नो। ली अनी उस्को पनि नो। दी अनी पछी कुनै दिन भेट्ने बाचा शाहीत गधी भरी चल्दै चल्दै क्त्म अैपुगेउ अज १० बर्ष भयो मुन को फोन आएको चाइना। र हाम्रो चिकै पुर भएको पनि छैन म अज पनि मुन को कल को प्रतिक्ष्य म छु। तर उस्को र मेरो भेट फेरी होल कि नहोल केइ त्यहाँ छैन बस म कुरिरको छु
ला यो चुसेर देखा" मैले मेरो दाँया हातको चोरी औंला त्यसको मुखमा राखें। उसले मेरो
नाडी समाती अनि मेरो औंला आफ्नो मुखमा राखेर चुस्दै आँखाभरि आँशू पारेर मलाई हेरी।
कस्तो innocent देखिएको मोरी लाई। बिस्तारै मैले अर्को औलां पनि उसको मुखमा राखिदिए
र बाँया हातले पोका सुम्सुमाउन थाले। स्यानो स्यानो पोका तर एकदम कस्सिएको पोका। ५
मिनेट जति पछि मैले उसलाई मेरो जिब्रो निकालेर चुस्न लगाएँ र उसले चुसेर थुकले
भिजेको औंला उसको कट्टु भित्रबाट पुतिमा छिराउन थाले। अर्को हातभने अझै दुध माढ्दै
ब्यस्त थियो। शायद ईमोशनमा आएर होला दुबैजाना ले जोड ले एक अर्कालाई किस खान
थाल्यौ। कहिले उसको जिब्रो मैले चुस्थे, कहिले मेरो उसले। बिस्तारै मैले उसको ब्रा
टप को भित्र बाट फुकालिदिए र "ल अब रेडि हु, तेरो फोटो खिच्छु" भन्दै फटाफट लाईट
बालेर पोज दिन लगाए। ईमोशनले गर्दा उसको दुधको मुण्टा सेतो टप नै च्यातेर बाहिर
एक दर्जन जती फोटो खिचेर म सोफामा गएर बसें र उसलाई भने "तेरो ब्वाईफ्रेण्डको लाडो
चुस्या छस्?" उसले मुण्टो हल्लाई - "ल मेरो चुसेर देखा त"। उ मेरो नजिक आई र घोडा
टेकेर बसि। मैले उभ्भिएर पाईन्ट खोले र सोफामा बसे। "कत्रो ठुलो" मेरो ठन्किएको
लाडो देखेर जिल्ल पर्दै भनि। "तेरो ब्वाईफ्रेण्ड को कत्रो छ?" मैले सोधें। मेरो
चोरी औला र बिचको औला समातेर भनि "यत्रो छ"। "ल उसोभई चाखेर हेर मेरो" भन्दै उस्को
टाउको मेरो लाडो को नजिक ल्याए। मेरो लाडो दुईटै हातमा समातेर भन्न थाली "मेरो
मुखमा अटाउछ"? मैले उसको टाउको लाई मेरो लाडो तिर दबाईदिएँ र बिस्तारै बिस्तारै
चुस्न लगाँए। त्यही बेला मैले उसको टप हटाएर कहिले उसको दुध खेलाउथें, कहिले उसको
पुती खेलाउथे। १० मिनेट जति चुस्यो पछि मेरो लाडो फुट्ला जस्तो भई सकेको थियो। उसको
मैले उसलाई उठ्न लगाए र कट्टु खोलेर मेरो लाडो मा बसाँए। उसको दुधको पोका मेरो
मुखमा थियो र उसको पुती मेरो लाडो भित्र हालेर कराउन थाली "ऐया, दुख्यो, ऐया"। उसको
हात ले मेरो गर्दनमा अंगालो मारेको थियो। पहिलो चोटि ठुलो लाडो छिरेर होला उसले
मेरो लाडो माथि बसेर राम्ररी तल माथि गर्न सकिन। मेरो पालो मैले उसलाई सोफामा राखें
र उसको दुईटै खुट्टा मेरो काँधमा राखेर कस्सिएको १८ बर्से पुतिलाई बेस्करी बजाउन
थाले। ५ मिनेट जति पछि मैले उसलाई उचालेर कोठाको बिचमा राखेर उचाली उचाली उसको माल
बजाउन थाले -- "ऐया ऐया मरें बाबा, पुग्यो मलाई, बिस्तारै बिस्तारै" उ कराउन थाली।
मैले नसुन्या जस्तो गरेर झन् बजाउन थाले। त्यतीकैमा उसलाई orgasm हुने बेलामा मैले
उसलाई सोफामा राखें र मेरो लाडो उसको पुती बाट निकाले र उसको मुखमा छिराए। "फेरि
छिराउनुस न, मेरो झर्नै ला छ" उसले भनि। मैले भने मेरो लाडो फेरी उसको मुखमा राखेर
उसको मुख मैथुन गर्न थाले। केहि बेरमै मेरो झर्ला जस्तो भयो। मैले उसको टाउको मेरो
लाडोमै अठ्याएर उसको मुख भरि मेरो विर्य झारेर उसको नाक दुई औलाले बन्द गरि दिए।
नाई नाई भन्दै निसास्सिएर रण्डिले मेरो घिउ घुटुक्कै निली। ५ मिनेट सम्म दुबैजाना
पागल भाई सकेको थिए
मैले सेक्स नगरेको धेरै दिन भाई सकेको थियो किन कि म मऋअगे को लागि सुध्रेको थिए।पोखर गएको दिन मन्दिर हरु गयो जस्ताइ बिन्द बसिनी ब्लह ब्लह्।अनी मन्दिर बाट आएर लन्च गर्‍यो अनी रूम म गयो।अनी मेरो बुढा ले मलाई पछाडि बाट आएर किस्स गर्‍यो गाल म, मेरो धद म।
मैले सारी लागएको थिए।मेरो ब्लोव्से को पिन बिस्तारै कोल्यो अनी मेरो ब्र को पिन पनि खोल्यो अनी मेरो बूब्स को निप्प्ले चुस्न थालयो उफ्फ्फ अनी मेरो बूब्स अनी मद्न लाग्योमलाई शाहऐ मज्ज अै राखेको थियो मेरो बडी भरी किस्स गर्न लाग्यो त्यो होत लिप्स ले छुद मेरो बडी नै सिरिङ्गग भयोतेस्पछी बिस्तारइ मेरो सारी खोल्न लाग्यो अन्द थेन पेतिकोअत म साह्रै एक्स्कितेद थिए र शाहऐ मज्ज पनि आएको थियोमेरो पेतिकोअत खोले पछी मेरो लेग्स म किस्स गर्न लाग्यो अनी सुम्सुमयो अनी मेरो पेन्ती खोल्न लाग्यो उफ्फ्फ म पागल भाई सकेको थिएमा हरै सकेको थियो मेरो पुत्ती म एमोतिओन अै सकेको थियो ।
म लदो चिर्ने प्रतिख्स्य म थिएअनी मलाई मेरो बुढा ले सोध्यो ।अरे यू एन्जोयिङ ।मैले भने थ छैन।के भाई रा को छ तिमी लाई?मैले भने खै थ छैन।अनी मलाई मेरो बुधो ले लाती अब यस्तै हुन्छ बिह गरे पछी भन्यो।मलाई पनि लाज लागे जस्तो गरेर सारी ले मुख चोपेअनी मेरो बुढा ले एस्तो राम्रो मुख चोप्न पर्दैन। म तिम्रो फके हेर्छु भन्यो र मुख म किस्स गर्‍योअनी म माथि नक्केद भएर सुत्यो । मलाई ततो भाई राखेको थियो तेइ माथि मलाई सार्है एमोतिओन पनि अै सकेको थियो।
एक्छिन म केही मेरो पुत्ती म पसेको जस्तो लागो। लदो त चिरी सकेको रहेछ।तेस्पछी जोड जोड सँग हल्ल्लिन थालयो लदो एकदम मोतो रहेछ। मेरो पुत्ती भरी भएको थियो।मेरो पुत्ती म मेरो बुधो को लगो खुब तिघ्त भएको थ्योउस्ले अा एम एन्जोइङ यू आर वोन्देर फुल। भन्दै थियोएक्चीन म त उस्को निस्कियो अनी मेरो बूब्स खुब चुस्योअनी त मेरो फर्स्ट सेक्स स्टोरी पनि सकियो त्यो दिन हामी अनी फेव ताल तिर घुम्न गयो
लाई कुतिकुती लगेर आयो
यो घटना म १४ बर्ष को हुँदा हो। मेरो घर काठमाडौं को खिछ पोखरी भन्ने ठाउँ म एस्। म त्यो बेला म एस् क्लास म पढाई थिए। शायद माघ महिन को दिन थियो म स्कुल सकेर भर्कर घर म आएर लुग फेर्न लगेको थिए मैलए रूम म पहिल को एस् कि ६िन राम्रो सँग वस्तै नगरि कन लुग फेर्न थाले। जब मैलए सर्ट फुकली सकेको थिए र फ्रुक्क खोलेको मात्र क् थिए मैलए अैन म मेरो काँचो अंकल लाई देखे। मलाई एक दुम लग लगेर आयो र हत्त न पत्त सर्ट उचलेर मैअले मेरो बुबु चूपे। मलाई अंकल अब बहिर जान्नु हुन्६ भन्थनेको त उह त बिसतरी म भये पती नै आउनु भयो मलाई एक्दुम दर लाग्यो।
उह ले बिस्तार मेरो कुम म समतेर मलाई उह भये पती तान्नु भयो। मेरो मुख एक्दुम रातो भएर आयो। मैलए क् गरेको भन्दै थिए उह ले मलाई तानेर अफ्फु नगिकै सोफ म बसलिसक्नु भएको थियो। मैलए क् गरेको भन्दा केही होइन चुप लगेर बस भनेर ढोका लगाउनु भयो तेस दिन घर म कोही थिएन। अनी दोक लगएर फर्केर मलाई तिमी लाई २ रुपी देउल मैलए भनेको मन है भन्नु भयो मैलए क् भनेर सोदे। मैलए तेती मात्र क् सोदेको थिए उह ले मैले चोपेको सर्ट तानेर मलाई भोटो म मात्र बनाउनु भयो त्यो बेला म ब्र को त्यस्तो चलन थिएन। मलाई लग लाग्यो म उह को खख म घोप्तो मुन्तो लगय्र बसे। उह ले बिस्तार मेरो छाती म हत राख्नु भ्यो र बिस्तारै मलाई चलाऊन थालनुभयो। मलाई कुतिकुती लगेर आयो। म चत्पतौन थाले अंकल ले मलाई एक चाइना चुप लग कस्तो रमाइलो हुन्६ भन्नु भयो। मलाई पनि एक्चिन पछी काउकुती भन्दा पनि क् क् जस्तो लगेर आउन थालयो र आनन्द लग्न थालयो।
र म चत्पतौन छाडेपची अंकल ले मेरो भोटो पनि फुकलिदिनु भयो अब म माथि नङै भए। अंकल ले मेरो दुध खुब मद्नु भयो। मलाई पनि एक्दुम रमाइलो लग्न थालयो उहले मेरो दुध को मुन्त म चलाऊद। बिस्तारि उहले मेरो सुरुवल को इगर खोल्नु भयो मलाई लग लगेर अयो मैलए बेस्करी सुरुवल समते तर केही लगेन उह ले मेरो सुरुवल खोली चाडनुभयो। अनी उहले मेरो भर्खर रौ आउँदै गरेको पुती म बिस्तार चलाऊन थालनु भयो। मलाई एक्दुम क् गाह्रो क् गरु भयो त्यो बेला म उहले उह को लदो घिकेर मेरो हत म दिनु भयो मैलए त भाई को सानो तुरी मात्र देखेको थिए अंकल को त ठुलो रहे६ मलाई अंकल ले एस्लाई हत म लेएर चलाऊ भन्नु भयो।
मलाई दर लागि लागि क् चुएको मात्र थिए उह को दुकुर त एक्दुम ठुलो भएर आयो। उह ले मेरो दुध एक्दुम बेस्कन चुस्नु थालनु भयो मलाई पनि क् गाह्रो क् गाह्रो भयो उह को लदो समतेर बेस्कन तनी दिए। मलाई भेत्रै देखी तिर्ख लगेको जस्तो भयो अनी उह ले मेरो पुती चत्न थालनुभयो मलाई एक्दुम दह भयो र उह लाई अफ्फु पनि तने उह ले पनि मेरो कुर बुग्नु भयो क्यर। मेरो पुती अगाडि उहको लदो लगेर राख्नुभयो र बिस्तारै धकेल्नु भयो। मलाई एक्दुम दुकेर आयो। मैले दुख्यो भनेर करये उह ले मेरो कुरै नसुनी मेरो मुख म उह को मुख रखेर चुस्न थालनु भयो। मलाई पहिलो चोटि भएर एक्दुम दुकिराखेको थियो। तर उह ले मेरो मुख थुनेर एक्चोटइबेस्कन ढकालनु भयो तेस्पची लुत्तैइ उह को मल मेरो भित्र चिर्यो।
मलाई पनि अब दु:खइ भन्दा अन्नन्द आउन थालेको थियो मैले पनि आँखा चिम्लेर उअहालैइ साथ् दिये केहीबेर हल्लेपची उहले लदो बहिर निकल्नु भयो र मेरो पुत्ती को माथि पत्ती चाडऔनु भयो मलाई के के भनेर घिन लगेर आयो साथै पुती पनि एक्दुम तत्तै राखेको थियो उअह ले मलाई फेरी एक्चोटएे पुती चत्न थालनु भयो र बिस्तारै मलाई फेरी उत्तेजन बधाई गयो र दुखे को त्यहाँ पाउन छोड्दे। तेत्तिकै म तल बाट कसैलए मलाई बोलयो र हत्तर हत्तर अंकल र मैले लुग लगएर तल गएउ। अंमा आउनु भएक रहे६अ। तेस पछी धेरै चोटती मेरो बिहे अगाडि सम्मा हामीलए सेक्स गरेउ।
अहिलए पनि कहिलए कही मौका मिल्द हामी सेक्स गरिरहाँसउ। उह ले पुती चतेको मलाई एक्दुम मन पर्सा। अहिलए मेरो दुई वटा चोर्‍ भाई सके। तै पनि मलाई त्यो अंकल सँग गरेको सेक्स ले अहिलए पनि रोमन्चित गराउने गर्६अ।
४-५ चोटि जती चिके
म धरान जने नाइट बसमा चढे मेरो सित म एक जन क्त रहि६ क्त्म देखी धर्न पुग्न लाई लग भाग १०।१२।घन्त जती लग्६ पहिल त हम्ले हल्क पारी चये गरेउ अनी गफ गर्देइ गएउ उस्को नेम रमा राइ रहि६ घर धरान मेरो पनि घर चाँही धरान नै हो तर म धेरै जस्तो धरान म बस्दिन अनी गफ गर्द गर्देइ हामी कह्न खाने थौमा आए पुगेउ र खान खान थालेउ मैले चाँही खान सग बियर पनि पिये उस्ले चाँही खान मात्र खै अनी पैसा सबै मैले दिये खनको र हामी फेरी बस म छाडेउ उस्ले बस म आए पछी खनको पैसा मलाई दिए मैले लिना मानिन् उस्ले जबर जस्ती गर्न थालि तर मैले मानिन् यसो गर्द गर्दै उस्को दुध म मेरो हत्ले चोयो
दुध पनि कतो सरो भने तेस पछी यू हल्क लजै र पैसा मेरो कख्मा फल्दी मैले तिपेर फेरी दिये तेस पछी हामी गफ गर्दै आएउ रत्को १२।बजे पछी यू निदौन थालि तर म चाँही निदैन यू निदएर मेरो कुम उस्को मुन्तो रखेर सुत्न थालि मैले उस्लाई बिस्तारै अन्गालो मरे तेस पछी मरो हत हरु गाडी हल्लिद खेर उसको दुध मैले जनी जनी चुन थाले यसरी उस्को दुध पैला त गाडी हल्लिद मात्रै चुन्थे पछीत तेत्ती कै पनि मैले मद्न थाले शाहएत उस्ले थापाइ होली तेसैले यू उठेए उस्ले भनी सरी है मत तपाईंको कुम म पो निदएछु भनी मैले भने इज ओके उस्ले फेरी सोदी अनी तपाईं चाँही नसुत्नु हुने मैले भने मेरो सतो पनि तपाईं नै सुत्नु न भने यस्तै करमा म गाडीको खलसी ले भन्यो ल ल पिसब फेर्ने मान्छे जती झरौ भन्यो म झर्न थाले यू पनि मेरो पछी पछी आए उस्ले भनी तपाईं र अक तिर जम्न ल मैले भने लज हुँदैन छोरा मान्छेर छोरी मान्छे पिसब फेर्न अक तिर जड भने उस्ले भनी मलाई दर लग्६ फेरी रती म कस्ले देख्छ राणा अ तपाईं ले मेरो देख्नु हुन्६ न म तपाईंको देख्छु भनी मैले पनि ठिकै६ भनेर पिसब फेरेर हामी फेइ बसमा छाडेउ मग्को महि थियो जाडो त भाई हल्६ तेही माथि नाइट बसको कुदै मैले ठुलो जक्केत लगको थिए उस्लाई जाडो भयो जस्तो लगेर मैले जाडो भयो तर उस्ले भनी हैन फेरी अक पछी मैले भने ल अलिक यत शरण यो जक्केत अदी अदी ओदौ केही हुँदैन उसलाई पनि जाडो भको थियो केर आए तेस पछी क् खोज्छ कनो आँखा भने झै भयो मलाई अनी मैले बिस्तारै मेरो हत हरु उस्को दुध्मा म लन थाले उस्ले कुनै बिरोद गरिन यस्तै करम १ घण्टा जती चले पनि मैले मजले यू स्को दुध चलाऊन थाले तेस पछी मैले किस्स पनि गर्न हले अनी उस्को पुती खेलौन खोजेको त त्यहाँ त अगी नै क् क् पो भाई सकेको रहिछ पनि आएर धुतो तर मेरो लदो द्खी चाँही तेती पनि थिएन बसमा सबै मान्छे सुती राखेको थिए अनी मैले उस्लाई बिस्तारै घोप्तो पर्न लगएर मेरो लदो चुस्न लगये उस्ले मणी मैले भने केही हुँदैन क् चुसन मेरो धेरै आग्रह पछी उस्ले चुस्न थालि मलाई पनि मज आयो तेस पछी मैले भने गरौल तर यू बोलिन एस्को मत लब मैले बुजे हुन्६ र उस्ले लगको सुर्वल मैले बिस्तारै आद खोले अनी पेरो पेन्त पनि खोले उस्ले भनी कसरी चिक्ने यस्तो थौमा मैले भने तिमी चुप चप बसन मसग इदे छ क् भने अनी उस्लाई हल्क उबिनु लएर म अली कती सरे अनी उसलाई म माथि बसएर उस्को पुतिमा म मेरो लदो चिरये म हल्लिन नमिल्ने भएको ले यू घरएे घरएे हल्ली रको थि तर बस ले आँफै हल्लाउने हुनाले हम्लाई गाह्रो भएन लग भाग १०।१५ मिनेट पछी उस्ले भनी भएन मलाई त हुन लगो भनी मेरो पनि भाईले बिद गर्न लगेको थियो मैले पनि हुन लगो भने र अनी १।२ मिनेट पछी मैले उस्को पुती भित्र नै मेरो भाई लाई चाडै दिये अनिस अन्त भये अनी हामी गफ गर्न थालेउ र मत निदये छु पो यसो उठेको त बिहान् पो भए६ अनी धरान आउन लगेको रहेछ अनी अक चाइना पछाडि धरान पनि आयो र हामी दुबइ जन झरेउ र मैले उस्लाई सोदे घर जने हैन उस्ले भनी हामी अक दुई दिन सगै बसौ न कुनै होटेल म हुँदैन मैले भने हैन मेरो मामा लाई मैले आज जसरी पनि भात्नु छ भने तर कर गर्न हली प्ल्ज भन्न थालि मैले पनि नै भन्न सकिन अनी हामी अकुत होटेल म गएउ र मैले मामा लाई फोन गरे मामा गाडी बाटोमा बिग्रियो म आउन ढिलो हुन्६ होल भने तेती बेला मेरो मामाको छोराको जन्मा दिन थियो तर म जन सकिन मामा ले ठिकै६ भन्नु भयो अनी हामी होटेल म बुद बुदी भएर नाम दर्त गरएउ अनी बसेउ खान असन खाएर नुहन लाई म गको त यू पनि पो आए म सगै अनी मैले भने तिमी बस्दै गर म नुहएर आउछु अनी तिमी जौ भने तर उस्ले मानिन् हामी सगै नुहौन गएउ मैले उस्को पुती रती देखेको थिन दिउसो हेरेको त यारा क्य दमी पुती भने मैले फेरी उस्को पुती म मेरो चोट अंल चिरएर हल्लाउन थाले उस्लाई मज आएछ केर उस्ले अर्को पनि अंल चिरौन लगै अनी मैले तीन वटा अंल चिरएर हल्लाउन थाले यू करौन थालि ययययय गड गड गड भन्न्न थालि नुहै रको थौमा कसैले सुन्छ भनेर मैले मेरो मुच उस्को मुख्मा जोदे अनी किस्स गर्न थाले यो करम अक चाइना रायो अनी उस्लाई मेरो लदो चुस्न लगये मजले चुसी यारा सबै भित्र चिरुन जेल सम्मा चुसी मलाई पनि मज आयो अनी अक चाइना पछी मैले उस्लाई घोप्तो परेर चिक्न थाले र माथि बाट पनि पनि ओन गरे पनिमा मजले चिक्यो तेस बेला चाँही मैले उस्को मुख्मा झरी दिये उस्ले सबै खै अनी अकचिन्मा भनी कस्तो चिप्लो है अब अर्को चोटइको पनि खन्छु ल भनु मैले हुन्छ भने तर पनिमा चिकेको ले मेरो लदो दुखी रको थियो र उस्लाई सोडेको पुटी डुखेको छैन भणेर उस्ले पनि पुटिको रस जटी सबै पनि पखलियो अणी डुख्डैणट भणी यसरी मैले डिण्मा ५।डेखि७चोटएे सम्मा उस्लाई चके र हामी ५दिन तो होटेल म बसेउ अनी हामी होटेल देखी निस्किएउ र उस्को फोन नो: मलाई दिर अ मैले पनि मेरो नो;दिये र हामी चुती एउ हामी फोन्मा कुर गरी रहन थेउ तर बिच्मा म ईन्डिया आर्मी भिद्न भनेर ईन्डिया गये तर म सफल हुन सकिन अनी तेसै ले म २।४।महिन ईन्डिया तिर नै बसे मेरो पोइलको सिम पनि हरको थियो ईन्डिया देखी मैले फोन कहिले पनि गरिन अनी २।४ महिन पछाडि म नेपाल आए अनी उस्को यद अयो र फेरी उस्लाई पोइलको नो: फोन गरेको तोत अर्कै मान्छे ले पो चलाऊदो रहि६ अनी मैले उस्को बारेमा भने यू मेरो साथी हो यसरी म ईन्डिया गको थिए भनेर सबै काहानी भने पछी उस्को नो: पये अनी फोन गरे उस्ले मलाई गाली गरी धोके बज एद उदार दुनियाँ भ्नी तर मैले उस्लाई सम्जये तर उस्को विवाह हुन लगेको तर म सग अक चोटि भेट्न चाहन्छु भनी तर मैले सोछे अब अर्कको हुन लगेको मान्छे लाई भातेर काम छैन तेसै ले मैले उस्लाई भने हेर म फेरी २।४ दिन भिर नै ईन्डिया जानु६ भेट्न सक्दिन भने उस्ले पनि ठिकै६ भनी अनी तो दिन देखी मैले उस्लाई फोन गर्न छोडे र म पनि क्त्म तिर नै आए क्त्म म म सानो जोब गर्थे मेरो कोठा क्त्म म बोउद म थियो म त्यसरी क्त्म म जोब गरेको पनि १ बर्ष हुन लगेको थियो मैले सोछेको थिन कि यू सग फेरी भेट हुन्६ भनेर हामी सगै काम गर्ने औत स्तफ को जन्मा दिन परेछ उस्ले मलाई पनि बोलयो अनी बेलुक तिर म पनि हिरो भएर पार्टी म गये त्यहाँ मैले राम अलाई देखे र मेरो साथी लाई सोदे उतो आए मै कोहो भन्र उस्ले भन्यो तो मेरो बुदिको साथी हो बुदो उ।क्।गको६ विवाह गरेको १बर्स हुन लगो विवाह गरेको ५।६ महिन पछाडि बुद यू क् गको भन्यो अनी मेरो साथीले मलाई सोदो किन मन परो हहहहह गाह्रो मैले हैन यारा सोदेको मात्र हो कोहो भनेर भने अनी तेस पछी म बियर पिउन थाले एती कैमा कसैले मलाई बोलयो सगर भनेर मैले सोछे एत्रो पार्टी म सगर त अरु पनि होलनी न्भनेर मैले वस्त गरिन तर पछी त तोत रमा ले मलाई नै पो बोलकी रहिछ मैले थाहा पये तर मैले नदेखे जस्तो गरे तर यू आयर मेरो हत समयएर मलाई तानेर औत कुनमा लागि र सोदी तिमी नेपाल मै चौ तेही पनि क्त्म तर मलाई फोन पनि गर्दौन केहो ? भनी मैले भने हेर तिमी कसैको भाई सक्यौ अब फोन गरेर क् गर्नु तर उस्ले भनी कसैको भये भन्दै म मेरो पुती पनि उस्को गोजिमा त लगएर हिद दैन नि म झस्के अनी उस्ले भनी आज मेरो घरमा जौ कोए छैन म मात्र हो भनी मैले हैन म जदिङ अर्कको बुदी सग रती उडी चिनेको मान्छे ले देखो भने क् भन्छ भने रतिमा कस्ले देख्छ तेही माथि म सग कार चके जम्न भन्न थालि ठिकैछ भनेर मैले साथी लाई भने म जान्छु यारा मेरो भोली अक दम जरुरी कम्छ सुत्नु परो भने उस्ले भनो रती अक्लाई जान्छस मैले बाईक लिएर गको थिए मैले भने केही हुँदैन बाईक छैन गाई हल्छु भने उस्ले ओके कु टेक करे भन्यो मैले थ्यांक यू भनेर बिद लिये यू पनि बिद लिएर आए उस्को घर चाँही बालाजु म रहिछ यू कार म अगी अगी म बाईक म पछी पछी गएउ उस्को घरमा अक जन बहिनी काम गर्दी रहि६ र तो बहिनी लाई उथै अनी भनी बुनु यहाँ दादा लाई अक पक्क लेइ देउत भनी तो बुनु पनि रत्को ११।१२ बजे तिर उठेर गएर मलाई रक्सी लेइ दि उस्ले मेरो पारी चये दि यू मेरो सानी मको छोरा हो तिमी अब गएर सुत भनी तो बुनु ले पनि हुन भन्दै गाई मैले तो पक्क सिद्दये अनी उस्ले पनि आफ्नो कपद फेरिचा कस्तो सेक्सी कपद लगको थि भने उस्को काडा देख्दै मेरो लदो ले निउ खोज्न थालो तर म समली रको थिए उस्ले आफ्नो बुदको केही कपद निकली र भनी यत्त कै सुत्ने कपद फेर हनी मैले उस्लाई भने तिमी अक चाइना उत जौनत अनी चेन्ज गर्छु भने तर उस्ले उसैको अगाडि फेर्नु पर्ने भनी मैले पनि ठिकैछ भनेर कपद फेरे अनी उस्को र मेरो लीला सुरु हुन्त हलो उस्ले भनी आमा पोइलको भन्दा पनि अजै ठुलो भएछ नित मेरो राजा भन्दै मेरो लदो चुस्न थालि मैले पनि उस्को पुती खेलौन थाले यस्तै करम हाम्रो १०।१५।मिनेट जती बितो तेस पछी मैले उस्लाई माथि चाडअएर म मुनी सुतेर चिक्न थाले पनि अलिक धेरै आको हुनाले केर निकै आवाज आयो प्यत प्य्त गर्दै तेस पछी मैले उस्लाई भने अक चाइना चुसन उस्ले पनि चुस्न थालि अक चुसे पछी उस्ले भनी मेरो पनि चतन त मैले पनि चतेको त यारा पनित कस्तो नुनिलो जस्तो पो हुदो रहि६ यारा तर मैले मेरो जिब्रो उस्को पुतिको दुलो म चिरै दिये उत रुये जस्तो पो गर्न थालि यययययययय गर्न थालि र अक चाइना म भनी तिम्रो लदो चिरौन आफु लाई कस्तो भाई सको भनी र मैले मेरो लदो उस्को पुती म अक चाइना पोइल तल माथि गर ए अनी चिरौन थाले उस्ले मलाई कसिएर समौन थालि मैले पनि जोड जोद्ले दिन थाले उस्ले खै कसरी हो पुती लाई चुमुक्क बनै यारा मलाई त यती मज आयो कि म पगल जस्तो भएर म पनि पो करौन थाले छु यसरी।१५।२० मिनेट चिके पछी मेरो लदेले फुसी झर्न लगेको थियो मलाई बहिर निकल्न अल्छि लगोर भित्रै झरी दिये उस्ले भनी राम राम मेरो त दिलो नै तलियो कि केहो कती धरेइ झरेको मुखमा झर्देको भये कती मल हुन्थियो भनी र मेरो लदो उस्को पुती बाट निकलेर चुस्न थालि मैले सोदे मज आयो भनेको उस्ले भनी धेरै मज आयो पोइल को भन्दा पनि मज आयो भनी तो रत मैले ।४।५। चोटि जती चिके अनी बिहानै म मेरो रूम तिर गये कपद लगएर ओफ्फिए गये उस्ले फोन गरी क्६ राजा सञ्चै चौ भनी मैले भने सञ्चै छु भरै फोन गर अहिले म अफिस म छु उस्ले फोन रखी तेस पछी बेलुक फोन गरी र ब्भनी म तिम्रो कोठामा आउन चाहन्छु भनी तर मेरो घर बेती कडा हुनु हुन्थियो क्त मान्छे कोठा म लेउन नपौने सर्थ थियो तर मैले भने मरो बहिनी गौ द्केही आउ दैछे घर बेती ब भनेको बहिनी हो भने ठिकै छ तर फल्तो क्त लेउने हैन भने मैले हुन्छ भनेर उस्लाई फोन गरे हल्क गौको जस्तो कपद लग एर बोउद म आउ म तिम्लाई लिना आउछु भने उस्ले हुन्छ भनी अनी बेलुकको ६।बजे तिर म उस्लाई लिङ आए अनी हामी सगै आएउ मैले खान पोइल नै बनको थिए अनी खान खाएर हामी फेरी आफ्नो काम सुरु गर्न थालेउ रत भरी मैले उसी चिके चुसये मैले पनि उस्को चते बहुत मज लिएउ
दसैंको टिका लगाईहोरी काठमाडौं फर्कने क्रममा म फर्पिङ बस पार्कमा बस कुरिराखेको थिए । साझ साँढे पाँच भईसकेको थियो । बस पार्कमा बस एउटा पनि थिएन । बस कुर्ने मान्छेहरु टन्नै थिए । पर्खदा पर्खदा बल्ल एउटा बस आयो। मान्छेहरु कोही झ्याल कोही ढोकाबाट बसमा प्रबेश गरे । म चाँही ढोकाबाट चढन सफल भए। बसको भिड छिचोल्दै बिचमा पुगे । बसभित्र साझ भएकोले अन्धकार छिप्पिदै गईराखेको थियो। मानिसको अनुहार बल्लतल्ल देखिन्थियो त्यो भिड्मा । खलाशिले मान्छेहरुलाई ठेल्दै थियो ढोकाबाट , यत्तिकैमा मेरो शरीर म भन्दा अगाडिको मान्छेको शरीरसँग टास्सिन पुग्यो । उसको उचाई मेरो लगभगको थियो पछाडिबाट हेर्दा छोटो केटाको जस्तो कपाल काटेको, जिउ चाँही पातलो तर उस्को नितम्ब चाँही केही ठुलै थियो जस्को कारन मेरो शरीरमा छुदा मलाई थाहा भयोकी उनी नारी हुन भनेर किनकी मेरो शरीरमा स्पर्स भएको त्यो मासुका डल्लाहरु हल्का ठुलो र पछाडि उठेको थियो । जुन घस्रन भएको थाहा हुँदा अनायासै मेरो शरीरमा एक प्रकारको ताप उत्पन्न हुन पुग्यो र आफ्नै संसारमा सुतेर सपना देखिरहेको मेरो सानो भाई बिउझिन पुग्यो ।
नयाँ कथाहरु पुरानो कथाहरु होम पेज
मिना सँग भर्खर बितायका पल हरु २०१५
छिमेकी बहिनी एलिना सँग चिकेको कथा 2016
batoma bheteko keti chikeko --- nepali sex story
मेरो रसिलो पुती
दिदी पर्ने लाई चिकेको !!
जिब्रो ले पुतिको बाहिरको भाग चट्दै थियो